ချိန်းတွေ့အျနေ့ဂိမ်း၊ဘယ်လိုမျိုးသမီးကိုဆွဲဆောင်၊နှင့်တွေ့ဆုံအမျိုးသမီးအတွက်ကိုရီးယား၊ရထား၊ဘယ်မှာအမျိုးသမီးများကိုတွေ့ဆုံရန်အဘို့အပေါငျးတို့သအကြောင်းပြောဆိုနေ့ဂိမ်းအကြောင်းသင်အွန်လိုင်းဖတ်ရှုနိုင်အများစု၏အတွေးအခေါ်နှင့်အကြံဉာဏ်အတူတူပါပဲ။ သွားရန်ကော်ဖီဆိုင်ကို။ ရပ်တန့်မိန်းကလေးတစ်ဦးအပေါ်လမ္း။ အယဥ္ေက်း။။။။။ အဲဒီမဟုတ်မကောင်းတဲ့အတွေးအခေါ်နှင့်ခင္သူမ်ားအချို့သောငွေပမာဏ၏အောင်မြင်မှုကိုကျွန်တော့်အတွက်၊ငါတွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်၊ငါ၏အမြင့်ဆုံးအောင်မြင်မှုအချိုးသည်အရပ်တွင်လူအနည်းဆုံးအကြောင်းကိုပြောနေ့ဂိမ်း:အဆိုပါရထား။ ဒီနေရာမှာအလေးအလွန်ကြီးစွာသောအကြောင်းပြချက်သောရထားသည်အကောင်းဆုံးနေရာအတွက်ရီးယားကိုဖြည့်ဆည်းဖို့အမျိုးသမီးနှင့်အသင့်ရဲ့ဂိမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်။ အ သာနိုင္ငံျနီးပါးအားလုံးကား။ အသီးအသီးကားတစ်စီးလောက်ရှိပါတယ်ထိုင်ခုံနှင့်အခန်းအခြားများအတွက်-ပြည်သူ့ရပ်လျက်ရှိသည်ဖို့လုံလောက်တဲ့အခန်းတစ်ခန်းမှမှတဆင့်ချော်နှင့်အမျိုးသမီးကိုရှာဖွေရှာတွေ့။ ဆိုလိုတာက-လူရထား၊နှင့်အကြမ်းဖျင်းထက်ဝက် အဲဒီလိမ့်မည်။ ထည့်သွင်းဖို့သူတို့အားနံပါတ်များ၊လူတွေကအဆက်မပြတ်ရယူခြင်းအပေါ်နှင့်ချွတ်၏ရထား၊ဒါကြောင့်သင်ရကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ်ပြန်အုပ်စု၏မိန်းကလေးများ။ စီးကရထားတစ်နေ့တာအတွင်းအကြီးများကဲ့သို့စစ်မှန်သော-ဘဝမည္တူ-သင်ကြိုက်လျှင်မကြည့်လမ်းအစကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်။ မယ့်ဆိုရင်စိတ်ဝင်စားထို့နောက်အလွန်ကြီးစွာသော၊နှင့်မယ့်ဆိုရင်၊သင်ရုံသွားမှလာမယ့်။ အစစ်အမှန်အလှတရားသောသင်အလွယ်တကူကိုယ့်အပျော်တက်ဆင်းကားလုပ်နေတယ်တစ်ဦးသို့မဟုတ်နှစ်ဦးကိုချဉ်းကပ်ႏွကား၊ထိုအခါရန်စတင်ဓ။ သင်အလိုရှိသလောက်ကြည့်အတူတူလူနှစ်ကြိမ်ပြီဆိုပါကသွားသည်။ ဒါဟာအလွန်မလွယ်ကူသော-ချဉ်းကပ်မှုအတွက်နာရီကြာပါတယ်ကြောင်းလိုင်းမှာဆိုးလ်(အစိမ္းလိုင္း)ကိုအပြည့်အဝစက်ဝိုင်း။ ကဆက်ပြောသည်အပိုဆု:မျဉ်းသို့ကွဲပြားခြားနားသောတက္ကသိုလ်ကရထားရပ်လိုက်နှင့်အဓိကလွှဲပြောင်းများအတွက်အပေါငျးတို့သအခြားသူများ။ ဒါဟာအများအားဖြင့်အပြည့်အဝထုပ်ပိုးဖွေးနေတယ်ဆိုရင်အပေါ်ညာဘက်အချိန်။ သင်ဖွင့်ပြောစေချဉ်းကပ်မှု၌ရပ်မိန်းကလေးတစ်ဦး၏ထောင့်တစ်ဦးရထားကား။ သင်ကယ်လွှတ်တစ်ခုဖွင့်လှစ်။ သူမမထင်ပါဘူးသောသူအပေါင်းတို့သည် စိတ်ဝင်စားပေမယ့်လုံးဝမခပ်။ ယခုသင်ရွေးချယ်ဖို့ထွတ်၊သို့မဟုတ်သင်သွားနိုင်သည်မိုဃ်းရိနှင့်ကြိုးစားဖွင့်ဖို့နည်းနည်းကတက်။ ရင်ဆိုင်လိုက်ရအောင်၊သင်ကြားမှတ်တိုင်သူသည်တခြားဘယ်နေရာမှာမှသွား။ သင်ကဲ့သို့ကောင်းစွာယူ၏အားသာချက်သင်၏သုံ့ပန်းပရိသတ်များနှင့်အပြေးသင့်ရဲ့တပြင်လုံးကိုလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်။ သင်စတင်နိုင်ပါသည်သို့အ လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဒါမှမဟုတ်ပြောပြအချို့ရီစရာဟာသစေခြင်းငှါအရရယ်မောထွက်သူမ၏၏။ မဟုတ်လျှင်သင်အမှန်တကယ်ဗုံးဖောက်ခွဲ၊အမည်မလမ်းလျှောက်အကွာသင်တို့ထံမှနေစဉ်သင်အပြေးသင့်ရဲ့လိုင်းနဲ့သူစတင်မည်မှတက်နွေး။ ဒါဟာတော်တော်ရှားပါးသည်မိန်းကလေးများဖြစ်အစပိုင်းတွင်အတွက်စိတ်ဝင်စားက်ပ္အပေါ်ရထားကြောင့်အလွန်ဘုံမဟုတ်၊ဒါကြောင့်အစဉ်အမြဲပေးပါကတစ်မိနစ်သို့မဟုတ်နှစ်ဦးအမီဆွဲထုတ်။ ဒီကူညီပေးပါမည်၊သင်အကြောစီရင်သောလိုင်းများအလုပ်မကြိုးစားသို့မဟုတ်အမျိုးမျိုးပေးအပ်ခြင်း၏တူညီသောမျဉ်း(ဤအကြောင်းကိုပိုပြီးအကြာတွင်)။ ရထားဂိမ္းအညီထက်အခြားအမျိုးအစားများနေ့ဂိမ်းတစ်ခုခုလုပ်နိုင်နှင့်အလေ့အကျင့်နေ့တိုင်းစရာမလိုဘဲတစ်မိနစ်ယူများထဲကသင့်ရဲ့အချိန်စာရင်း။ ပါက သင်စီးရထားမှအလုပ်၊အပွေးအနည်းငယ်ချဉ်းကပ်မှု။ နေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့လမ်းအပေါ်သွားပါတီညဉ့်အဘို့အ၊အကြိမ်ကြိမ်ချဉ်းကပ်ပြီးစတင်အရှိန်အဟုန်ရရှိမှုသည်။ နေတယ်ဆိုရင်သင့်ရဲ့သွားရာလမ်းပေါ်တွင်ဟွန်သို့မဟုတ် အပေါ်တစ်ဦးတနင်္ဂနွေညဥ့်အခါ၊သင်ဖြစ်ကောင်းမိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်သွားသောလမ်းနှင့်စတင် ေညဦးယံ၌။ အစစ်အမှန်အားသာချက်ရထားဂိမ်းဖွင့်ထိုင္တဲ့အကျိုးရှိစွာ။ သင်ရှိသည်ဘယ်တော့မှလမ်းလျှောက်ဖို့ပိုထက်မီရှာတွေ့မှနောက်ထပ်မိန်းကလေးစကားပြော။ သင်ပျက်ကွက်လျှင်၊ဒါကြောင့်ပဲမိနစ်ပုိးေအထိသင်စတင်နိုင်ပါသည်၊အနောက်ချဉ်းကပ်မှုမှာအထွတ်အထိပ်နာရီ။ သင်အလေ့အကျင့်နေ့ရက်ကိုမဆိုအချိန်။ သင်အလေ့အကျင့်နေရာတိုင်းသင်သွား။ သင်လုပ်နိုင်တယ်ကိုယ်တော်သို့မဟုတ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့်အတူပြီးဘယ်တော့မှမထွက်ခံစားရ၏။ သင်ပြုနီး၏အိမ်။ သင်အတွက်လုပ်နိုင်တာအခြားမြို့။ သင်ပင်ထိုသို့ပြုမူး၊လောက်မြင့်မားသောအောင်မြင်မှုနှုန်းကကျွန်တော့်အတွက်ပါပုံကဲ့သို့မကောင်းတဲ့စိတ်ကူး။ သင်ကြိုးစားနိုင်ပါ၊အသစ်လိုင်းများ။ သင်ကြိုးစားနိုင်ပါကွဲပြားခြားနားသောစတိုင်များ။ သင်အလုပ်လုပ်နိုင်တိုးတက်အောင်အပေါ်တိကျတဲ့အစိတ်အပိုင်းများသင့်ရဲ့ဂိမ်းတူ၊ခန္ဓာကိုယ်ဘာသာစကား၊ဟန်အနေ၊သို့မဟုတ်မျက်စိ ဆက်သွယ်နိုင်ပါသည်။ င့္တင္ႏိုင္ပါသည္ယားဆိုရင်သင်ရုံခံစားတူလေ့ကျင့်။ အဘယ်သူမျှမကိစ္စအဘယျသို့အဆင့်ဂိမ်းမှာနေသို့မဟုတ်သင်လိုချင်သည့်အရာကိုတိုးတက်စေရန်၊ရထားချဉ်းကပ်ဝေးအားဖြင့်အထိရောက်ဆုံးနည်းလမ်း။ သောငါ့ကိုအဆောင်တတ်၏နောက်အချက်မှအနောက်ဆုံးတွင်အကောင်းဆုံးအကျိုးကိုရထားဂိမ္းမည်ဖြစ်ပါသည်မြှင့်တင်ရန်ရန်သင့်စွမ်းရည်ကိုမှချဉ်းကပ်မှုအကြီးအကျယ်။ တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဂိမ်းအသစ်များနှင့်ရရန်ကြိုးစားနေသင့်ရဲ့ယုံကြည်စိတ်ချမှုဖွင့်ဒါမှမဟုတ်ဝါရင့်ကစားသမား၊နေရာမရှိရှိပါတယ်သောအပစ်ပါလိမ့်မယ်သင်အတွက်အအနက်ရှိုင်းဆုံးအဖြစ်လျင်မြန်စွာရထား။ သင်တို့ပြုရှိသည်တွက်ကြောင့်အများပြည်သူရှေ့တွင်လူတိုင်းအပေါ်ရထားကား။ ပြီးကတည်းကင္ငံျ၊သူတို့ကြည့်ကြည့်ဖို့သင်ဘာလုပ်နေ။ အထူးသဖြင့်အခါသင်ပထမဦးဆုံးစတင်ကြိုးစားနေ၊သင်ရလိမ့်မည်ထွက်လွ။ အများကြီး။ ဒါဟာစိတ်ထိခိုက်စဦးတွင်၊ထိုသို့အရှက်ပေမယ့်သင်ဆက်လက်။ သင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ခက်ခဲတဲ့နှင့်ကိုယ်ခံစွမ်းအားကိုယ့္ပါတီ။ သင်ဖြစ်လာပါလိမ့်မယ်ထုံအ ပွဲအမည်ပင်ချို။ ကြာသော်လည်း၊သင်ရပါလိမ့်မယ်ပိုပြီးအောင်မြင်မှုများထက်ပျက်ကွက်။ ပြီးနောက် အကြောင်းတစ်နာရီသို့မဟုတ်နှစ်ခုအလေ့အကျင့်များ၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အမှန်တကယ်ထိရောက်သော-မိနစ်ဖွင့်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖမ်းပြီးမှသူမ၏အကျိုးစီးပွား။ ဒီလိုမျိုး၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ထပ်ခါတလဲလဲနိုင်ပါသည်နှင့်ဘယ်နေရာမှာမဆိုသင်အသုံးပြုသွားသောနောက်၊သင်ရပါလိမ့်မယ်၊ဒါကြောင့်ကဆင်းအများကြီးတင်းကျပ်။ သင်မြန်မြန်ဆန်ဆန်သင်ယူပြီးသောလိုင်းများကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်နှင့်အရာမြားပါဘူး။ တဦးတည်း၏အခက်ခဲဆုံးသောအရာတို့ကိုရတဲ့အကြောင်းကောင်းတစ်ခုအလုပ်လုပ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အတူတကွသည်ရုံးတင်စစ်ဆေးနှင့်အမှားအစိတ်အပိုင်း။ သင်ထွက်သွားလျှင်အပေါ်လမ္းကြိုးစားနေတက်လုပ်ကိုင်ဖို့သို့မဟုတ်တင်းကျပ်တဲ့နေ့ဂိမ်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကောင်းတစ်ခုနာရီအလုပ်၏အမည်နှင့်ပတ်သက်။ သင်ရနိုင်အနည်းငယ်မှအသီးအသီးချဉ်းကပ်မှုအသစ်နှင့်အဘယျသို့ထွက်ပုံအဘို့ကောင်းမွန်စွာအလုပ်လုပ်။ သင်သည်ဤသို့ပြုလျှင်သုံးသို့မဟုတ်လေးကြိမ်၊သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်ဦးတော်တော်လေးကောင်းသောစိတ်ကူးဖွင့်နည်းနှင့်ထိတွေ့နှင့်အတူပုံမှန်အစည်းအဝေးယားမိန်းကလေး။ သို့သော်ငြားလည်း၊သင်ပင်သုံးစွဲနာရီအပေါ်တစ်ဦးရထားအချို့သောစနေနေ့ကြိတ်အားဖြင့်ချဉ်းကပ်၊သင်ရလိမ့်မယ်တစ်တန်၏လက်ငင်းတုံ့ပြန်ချက်။ သင်ကြိုးစားနိုင်ပါချပြီးအသစ်အတွက်စစ်ထွက်ယူပြီးအကြောင်းတမထင်ပါဘူး။ သင်ကြိုးစားနိုင်ပါကွဲပြားခြားနားသော အတွက်မိနစ်။ သင် ကြိုးစားနိုင်အတူတူဖောက်တံ။ အဆိုပါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပါလိမ့်မည်အတိအကျဘယ်လောက်ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်တယ်။ သင်ရလိမ့်မည်ချက်ချင်းတုံ့ပြန်မှုသင်ကူညီနိုငျသောအပုတ်ချတဲ့နေ့ကဂိမ်းလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်အစက်အပြောက်-ပေါ်မှာသင်တို့အဘို့အထူးသဖြင့်စတိုင်။ အဆုံးအားဖြင့်တစ်ဦးရထားကြိတ်အစည်း၊သင်ခံစားရပါလိမ့်မယ်ခက်ခဲတဲ့ဖြစ်ပြီးတစ်ခုဖွင့်လှစ်လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်နိုင်ကြောင်းဆွဲဆောင်မှုအဘီမ်ားပယ်ရှင်။ သောတစ်ခုတည်းသောအရာစောင့်ရှောက်ရထားခံရမှတစ်စုံလင်တဲ့နေ့ကဂိမ်းစက်အပြောက်ဖြစ်ပါသည်၊သင့်ရဲ့အပြန်အလှန်ပြီးသားအချိန်-ကန့်သတ်။ ဒါဟာအလွန်ခက်ခဲကူးပြောင်းရန် -ရက်စွဲများ။ ခုလိုတစ်လျောက်ပတ်သောစကားပြောဆိုမိန်းကလေးတစ်ဦးနှင့်အတူ၊သင်မေးရန်လိုအပ်ပါတယ်ဘယ်မှာသူမ၏ခေါင်းစဉ်တော်တော်စောနိုင်အောင်သင်အစီအစဉ်သင်သည်သင်၏လုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ကိုပတ်ပတ်လည်သင်ကျန်ကြွင်းစေပြီ။ သူမဟန်အလွန်လက်ခံသင်အလုပ်ရှုပ်မဟုတ်ပါဘူး၊သင်ဖြစ်စေခြင်းငှါထွက်အလုပ်လုပ်နိုင်အ -ရက်စွဲအားဖြင့်ပယ်ဆိုတော့တစ်ချိန်တည်းမှာ၊ဒါပေမယ့်အဖြစ်မဖြစ်အပေါ်လမ်းပေါ်တွင်သို့မဟုတ်ကော်ဖီဆိုင်များကြောင့်မိန်းကလေးများအပေါ်ရထားပြီးသားပေါ့။ သူတို့မှာရောက်နှင့်၎င်းတို့၏အစီအစဉ် ဖွယ်ရှိပါဝင်ပတ်သက်နေကြဘူး။ ဒီကိုဆိုလိုသည်သင်ရှိသည်လိမ့်မယ်အဘို့အနည်ထိုင်ဖို့အချိန်။ ဒါကလည်းမဆိုးရဲ့သောကြောင့်သော်လည်းတစ်ဦးမွန်းလွဲပိုင်း၏ရထားဂိမ်းကစားနိုင်တင်အေးမြသောနံပါတ်များလျှင်သင်တာကောင်းမှာပါ။ ဖွင့်ဖို့လုံလောက်တဲ့ထက်ပိုတက်ဖြည့်စွက်သင့်ရဲ့နေ့စွဲပြက္ခဒိန်အတွက်လာမည့်ရက်သတ္တပတ်သို့မဟုတ်နှစ်ခုသည်။ ငါဟာအမြဲတမ်းကြီးမားတဲ့ပရိတ်သတ်၏ရထား၊အထူးသဖြင့်ကာလအတွင်းတနင်္ဂနွေ။ ကိုယ့်ပြင်းပြင်းထန်ထန်တိုက်တွန်းအားလုံးသင်ကစားသမားတွေထွက်ရှိရန်စတင်ဖို့အကူအညီသင့်ရဲ့ဂိမ်းတိုးတက်ကောင်းမွန်နှင့်အဆင့်အောင်မြင်မှုအစဉ်အတွက်။ ဟေး၊အံ့သြနေတယ်ဆိုရင်သင်ချဉ်းကပ်ကိုးရီးယားသို့မဟုတ်ဗမာဖြစ်စေ၊ဘာသာစကားပါဘူးတီကတစ်တရားမျှတငွေပမာဏ၏အာရုံစိုက်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်-နံပါတ်များနေ့အရည္အခ်င္းမကူညီနိုငျဒါပေမယ့်လေးစားကျေးဇူးတင်၊ငါများသောအားဖြင့်ချဉ်းကပ်မှုအတွက်ဗမာ၊မဟုတ်လျှင်ကျွန်မကြိုးစားနေတာပါခံရဖို့ချင်တယ်ကိုးရီးယားဒါပေမယ့်မဟုတ်ကြောင်းမကြာခဏ။ သင်အတွက်အသက်ရှင်။ အခမဲ့ခံစားအကြှနျုပျကိုအီးမေးလ်များရှိပါက၊သင်အခြားမေးခွန်းများကို၊ငါစကားကိုနားထောင်ချင်ပါတယ်ရာကိုမလိုပါဘူးရှိခြင်းနိုင်အောင်ပါပဲ။ ကျေးဇူးတုံ့ပြန်ချက်များအတွက်၊တစ်လအရာကိုရေးချမိဖို့အလုပ်လုပ်ကိုင် နိုင်ဖို့အတွက်၊ကိုယ်အ…
ကနေဒါအမျိုးသမီးနှင့်ကိုးရီးယားအမျိုးသားများ၊လက်ထပ်ပြီးနှင့်နေထိုင်မှုအတွက်ကိုရီးယား၊စေအတော်လေးရှားပါးသောအမျိုးအစားမိသားစုပင်ယနေ့။ သင်တွေအများကြီးဖတ်ဒီဆိုက်တွင်ကငါ့အတွေ့အကြုံတစ်ခုအဖြစ်ဥရောပအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့တဲ့ကိုးရီးယားလူ၊ဒီတော့ဖြစ်သွားစေခြင်းအကြောင်းဖတ်ဆက်ဆံရေးကိုနှင့်အတူကိုရီးယားမှယောက်ျားတစ်ဦးကွဲပြားခြားနားမြင်။ ၊အမျိုးသမီးတစ်ဦးနောက်ကွယ်တွင်ဖြစ်လာကောင်းတစ်ဦးယား(မင္နဲ)ဇကြင်နာလုံလောက်တဲ့အဖြေဖို့ငါ့ဖန်ဆင်းခြင်းမးခြန္း:စိတ်ရင်းမှန်ကိုကျေးဇူးတင် များအတွက်ဒီအင္တာဗ်ဴးေသုံးစွဲဖို့ခွင့်ပြုချက်ဓာတ္ပံုမ်ားသူမ၏ရိုးရာကိုးရီးယားမင်္ဂလာဆောင်နှင့်သူမ လွကနေဒါ-ကိုးရီးယားမိသားစု။ ဤသည်ဉာဏ်ဗျူးနှင့်ဇာတ်လမ်း။ ငါအလိုရှိခဲ့ပြီးသုံးစွဲဖို့ထိုကဲ့သို့သောတစ်ဦးချင်းစီနှင့်စုံတွဲများ’ကြီးစွာသောအလုပ်။ ကြှနျုပျတို့သညျပွုဖို့စီစဉ်နေကြပါတယ်ပို။ အဲတကယ်အမျိုးသမီးများစွာရှိသည်သောသူအံ့သြဖွယ်ပုံပြင်များပြောပြရန်ကယားပါဘူး။)တြက္လည္းလူယောက်ျားတစ်ယောက်မွေးဖွားကြီးပြင်းအတွက်တောင်ကိုရီးယား၊နိုင်သူလမ်းကြောင်းနှင့်သူ၏ကိုရီးယားအဘိုးကို၊တူ၏၊အသန်းအဆက်အၾကာက။
ရိုးရှင်းတဲ့ကိုရီးယားရည်းစားများ ။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အောက်တွင်။။။။။ ၎င်း၏အမွီအကြောင်း-မင်းရှည်လျားပြီးပေးသည်မယုံထွင်းသိမြင်ယားမိန်းကလေးများတစ်ဦးကောင်လေး။ ဒီဗီဒီယိုထဲမှာမိန်းကလေးနှစ်ဦးကိုအကြံဥာဏ်ပေးမ-ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးများအပေါ်အဘယ်သို့ပြုရမည်နှင့်အဘယ်သို့ပြုမူရကိုရီးယား။ ရာ ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့ဒီကိုသုံးနိုင်သည်အတူတူကိုရီးယားမိန်းကလေးများမှတုံ့ပြန်ထီးဖယ္ထုတ္စက္မ်ားရီအောက်ကဗီဒီယို။ ၎င်း့ကမင္းရှည်လျားပြီးအလွန်ကြီးစွာသောဆက်မှနောက်ဆုံးဗီဒီယိုငါနှင့်အတူမျှဝေဖို့သင်ကူညီနားလည်ကိုးရီးယားအပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားတွေကိုလိင်နှင့်လိင်စိတ်။ ပြီးနောက်သင်စောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုကိုနားထောင်ဖို့၊ငါ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အတူ ငါကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်နေရာအချို့အရေးကြီးဆုံးကိုရီးယားမိန်းကလေးများမှတုံ့ပြန်ဟာသနှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်း နှင့်အသင်သည်အဘယ်သို့ကနေလေ့လာသင်ယူစောင့်ကြည့်အောက်ကဗီဒီယို။ ၎င်း့ကမင္းရှည်လျားပြီးအလွန်ကြီးစွာသောသင်ပုန်းကြီးတွင်ကိုးရီးယားအပေါ်ထားရှိတဲ့သဘောထားတွေကိုလိင်နှင့်လိင်စိတ်။ ပြီးနောက်သင်စောင့်ကြည့်ဗီဒီယိုကိုနားထောင်ဖို့၊ငါ့ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေနှင့်အတူ ငါကိုမီးမောင်းထိုးပြသည့်နေရာအချို့၏အရေးအပါဆုံးရှုထောင့်နှင့်အဘယ်သို့သောလူအဖို့ဆွဲဆောင်မှုကိုးရီးယားအမျိုးသမီး။ အံ့ဩစေသည်ဘယ်အရာကိုလူအဖို့ဆွဲဆောင်မှုကိုရီးယားအမျိုးသမီး။ ပထမဦးဆုံးစေပြီးသောအရာကိုနားလည်သဘောပေါက်စေသည်အမျိုးသားများအဖို့ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးအထွေထွေအတွက်။ နှစ်ပေါင်းပြီးနောက်လေ့လာနေ၏အထီး-အမျိုးသမီးဆွဲဆောင်မှုဤအရာကိုငါမွီတွေ့ရှိ:အမျိုးသမီးတန်ဖိုးလူ့ရင့်ကျက်ပုလ္လိင်အတွေးအခေါ်မစ်ရှင်ဆွဲဆောင်မှုယောက်ျားနိုင်ပါပြီ ဆွဲဆောင်ဖို့ရှာဖွေတွေ့ရှိသောတောင်ကိုရီးယားလပ်ရက်များအတွက်စုံလင်သောအစည်းအဝေးကိုရီးယားအမျိုးသမီးများရှာဖွေတွေ့ရှိသောတောင်ကိုရီးယားလပ်ရက်သည်စံပြများမှာအစည်းအဝေးကိုရီးယားအမျိုးသမီးနှင့်ဘွတ်ခရီးစဉ်အတွက်ယုံကြည်စိတ်ချမှုနှင့်အတူ။ စီခရီးကိုရီးယားနှင့်သိလိုသောတောင်အားလပ်ရက်များအတွက်အကောင်းဆုံးအစည်းအဝေးလှကိုရီးယားအမျိုးသမီးများမှာ။ ေတာင္ဥကင္မ္ခ်ီဘယ်လိုသိရန်နာရီပေါင်းများစွာအလုပ်လုပ်။ ဘယ်လောက်တောင်ကိုရီးယားသတင်းဖော်င္ငံျခားသားမ်ားအာရုံစိုက်သလား။ တောင်ကိုရီးယားသတင်းတည်ရှိအားဖြင့်ငွေရှာရင်ခံပုံပြင်များ(နောက်ပြန်သောမီဒီယာထွက်ပေါက်မဟုတ်ပါ။ က)ဝမ်းနည်းစရာအတောင်ကိုရီးယားမီဒီယာကိုအလွန်ကောင်းသောနယ်ပယ်:သင်အင္ငံျ။ သို့မဟုတ်အစားအသင်လူငယ်နိုင်ငံခြားထီးကဒီအတိုမြင်နိုင်ပြီးတဖက်သတ်အကျိုးရှိသောအကြောင်းပြချက်တွေဘယ်လောက်တောင်ကိုရီးယားလူဦးရေအာမခံသင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ဘဝမှာရှာဖွေနေအာရှလူဦးရေကိုကူညီနိုငျသင်သည်အလွယ်တကူငြိမ်ဝပ်စွာနေကိုသိကြောင်းထွက်ရှိပါတယ်။ မည်သို့နားလည်သဘောပေါက်အမျိုးသမီးများစွာရှိပါတယ်များ၏ရာခိုင်နှုန်းသောသူဖြစ်စေနိုင်ငံရပ်ခြားတွင်သို့မဟုတ်စိတ်ဝင်စားနိုင်ငံခြားယဉ်ကျေးမှုအထောက်အကူဖြစ်ပါတယ်။ ရှိပါတယ် ကြမ်းဖျင်းအားဖြင့်သန်းတာင္ဆိုးလ်မြို့တောင်ကိုရီးယားချိန်းတွေ့ဘို့အကိုရီးယားအမျိုးသမီး။ ဆိုးလ်မြို့တောင်ကိုရီးယားသာဖြစ်၏မြို့တော်တောင်ကိုရီးယား:၎င်း့စရာကိုးရီးယားအမျိုးသမီးအသက်ရှင်သော၊အလုပ်(ကိုနဲ့ကစား။)၎င်း့၏အကြီးမားဆုံးမြို့၏ကမ္ဘာကျော်နှင့်အတူလူဦးရေသန်း။ ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့ဆိုလိုပါသလား။ သင်သည်အစဉ်အဆက်၏ပြဿနာများ ချိန်းတွေ့နှင့်အတူကိုရီးယားအမျိုးသမီးတစ်ဦးဆက်ဆံရေးအတွက်ကိုရီးယားအမျိုးသမီးနှင့်ပြဿနာများ၏ ချိန်းတွေ့သင်စိုးရိမ်။ ကိုယ်ဘာသာျပန္ခ်က္ပြီးသားအတွေ့အကြုံအချို့တင်းမာမှုအကြောင်းသင်သိမှာမဟုတ်ဘူးတီများအတွေ့အကြုံနှင့်အတူအမျိုးသမီးတစ်ဦးအလားတူနိုင်ငံကနေ။ လွယ်ကူသောငြိမ်ဝပ်စွာနေင်တစ်ချိန်ကသင်ကသတိပြုမိသည်ဤအလားအလာနည်းတယ်အသစ်တစ်ခုလူမှုကွန်ယက်၏ကိုရီးယားမိတ်ဆွေတွေရှာကူပါစံပြယားအမျိုးသမီး။ ဖြစ်ခြင်း၏အစိတ်အပိုင်းအသစ်တစ်ခုလူမှုကွန်ယက်နှင့်အတူဘူးမ်ားဝင်ရောက်ကြည့်ရှုပေးမည်ဟုဆိုကိုရီးယားအမျိုးသမီးလုပ္စတီခဲ့ကြနိုင်ခဲ့။ သင်အမယ်လည်းအတွေ့အကြုံအသွင်အပြင်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုအများဆုံးင္ငံျခားပါဘူးတီတွေ့ကြုံရ(ဘို့အကောင်း
ကိုဘယ်လိုအရူးဖြစ်ပါသည်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့မိသားစုကိုတွေ့ဆုံအတွက်အချိန်မှီနေ့ကျွန်ုပ်တို့မင်္ဂလာဆောင်နေ့။ ဒါဟာအာရုံကြော-ယူဘဲရိုးရာကိုရီးယားမိဘများနှင့်တွေ့ဆုံတော်တော်ရိုင်းကိုလံဘီယာမိသားစု။ ကျွန်တော်တို့ဟာကိုယ့်မျှော်လင့်ကြောင်းဒါကြောင့်အားလုံးချောချောမွေ့မွေ့သွား။ ကျွန်တော်တို့နိုင်ဘူးကြောင့်ပြုမိပါပြီအခြားမည်သည့်လမ်းကတည်းကကျွန်မတို့အားလုံးအသက်ရှင်အတွက်ကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများကပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ခဲ့ရတယ်အရက်နှင့်အတူချွတ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးမင်္ဂလာဆောင်နှင့်နှမြောဖို့အချိန်နှောင်ကြိုးမိသားစုနှင့်အတူ။ ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့လုပ်တယ်။ (ကျနော်တို့အနေနဲ့နိုင်ငံတကာစုံတွဲတစ်တွဲ၊ကိုးရီးယားနှင့်ခင်ပွန်းသည်ကိုလံဘီယာ-အမေရိကန်ဇနီး)ငါတို့သည်အဘယ်သို့။ ကိုးရီးယားဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရီ။
ဆာ၊ရုမော်ဒယ်နှင့်သရုပ်ဆောင်အခြေခံအျနှင့်ဂျေး၊တစ်စစ်သားဆင္ေသုံးခြင်းအတွက်တောင်ကိုရီးယားစစ်ရေး၊တူတကွဖြစ်ရပြီကတည်းက။ အဆိုပါစုံတွဲသည်မိမိတို့၏နေ့စဉ်ဘဝအသက်တာနှင့်စွန့်စားသူတို့ ၊သူတို့ကေနောက်လိုက်သောသူအတူမေတ္တာ၌ကျဆင်းင်းတို့၏ကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဆက်ဆံရေး။ သူတို့ကအစရှိသည်ကိုရီးယားဗီဒီယိုအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ရုပ်သံလိုင်းသူတိုယ့္ျကသူတို့ရဲ့ခရီးစဉ်များနှင့်စွန့်စားရီးယားနှင့်အလာရုစ္။ ပေမဲ့သူတို့နှစ်ဦးစလုံးကိုရီးယားမှာအခုတော့၊သူတို့ဖြည့်ဆည်းမပေးနိုငျမကြာခဏကြောင့်ဂျေးလက်ရှိတွင်အမှုဆောင်ယား ။ ဆာဖော်ပြထားသူမမီးရှို့ချစ်ခြင်းမေတ္တာဆီသို့ဂျေးသူမ၏ အကောင့်နှင့်အရည်ပျော်လူတိုင်းထည့္ပါ။ ကျွန်တော့်အချစ်၊ကျွန်တော်နောက်ဆုံးတွေ့ယနေ့ငါမှာဖြစ်ကြောင်းသိမဖတ်နိုင်ဒီအခုအချိန်မှာဘာပဲဖြစ်ဖြစ်။ ဒါပေမယ့်ငါတကယ်လိုချင်တဲ့အသိသောဤမျှဂုဏ်ယူပါတယ်။ ဖြစ်ခြင်း၏အကောင်းဆုံးအစစ်သားလူမျိုးမှအလွန်အေးမြသည်။ ကျေးဇူးအများကြီးကြိုးစားနေပြီးအလုပ်လုပ်ကိုင်ဖို့ခဲယဉ်းဒါအရအားလုံးသောအခွင့်အလမ်းအကြှနျုပျကိုပဌနာ။ ငါတကယ်သဘောပေါက်နားလည်ငါပြီးသားကိုလွမ်းတယ်နှင့်အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်အစည်းအဝေးကြလိမ့်မည်ဟူသောအလွန်ကြာ။ ပေမဲ့သူတို့မမြင်နိုင်သီးအသီးအခြားအဖြစ်အများကြီးချင်တယ်၊သူတို့ချစ်နေဆဲဖြစ်ဂိုအားဖြင့်ခေါ်အသီးအသီးအခြားနှင့်လာရောက်လည်ပတ်သီးအသီးအခြားအခါတိုင်းဖြစ်နိုင်။
ကိုးရီးယားကင္ယာအကောင်းဆုံးအခမဲ့ချိန်းတွေ့ဖို့ကိုအတူချိတ်ဆက်ယားတစ်ဦးတစ်ယောက်သို့မဟုတ်တွေ့ဆုံရန်ယားတစ်ဦးတစ်ယောက်ကမ္ဘာအနှံ့မှ။ ကိုးရီးယားကင္ယာလွန်ကြီးစွာသောနည်းလမ်းဖြစ်ပါတယ်ဖြည့်ဆည်းဖို့သင်တို့ပတ်လည်ကိုလူများအတွက်ကိုရီးယား၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေခြင်းနှင့်ရောနှောသူတို့နှင့်အတူ၊သို့မဟုတ်ရှာဖွေရန်ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေးအတွက်နှင့်ပင်ထောင်။ ဒီမှာအားလုံးဖွင့်။ ရှိမရှိရှာကြဖွေရန်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများနှင့်၎င်းတို့’ဝင္ဇာတ္လမ္း’ သို့မဟုတ်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေနေပါတယ်မိတ်ဆွေတစ်ဦးသင့်ရဲ့နေထိုင်စဉ်အတွင်းကိုရီးယားမှာ၊ကိုးရီးယားကင္ယာရှိသည်လိမ့်မယ်တစ်စုံတစ်ဦးကသင့်အဘို့အ။ ဘယ်အရာကိုကိုးရီးယားကင္ယာထူးခြားသည်ဤဖြစ်ပါသည်:သငျသညျဖြည့်ဆည်းနိုင်လူတို့ကိုတိုက်ရိုက်အားဖြင့်ဗီဒီယိုများကြည့်ရှု၏။ အောင်သူငယ်ချင်းများ၊အစည်းအဝေးနှင့်လူမှုရေးခဲ့ဖူးကြောင်းပျော်စရာ။ ကြည့်ရန်ဗီဒီယိုကလစ်လူမျိုး၏အနီးအနားပြီးသည့်အခါသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကဲ့သို့သင်တို့အိမ်၊ရှက်ဖြစ်မနေပါနဲ့၊ကိုယ့်ပြောမင်္ဂလာပါ။ ညာဘက်ပြီးနောက်၊သင်မည်မဟုတ်တစ်ခုတည်းခံစားရတော့ဘူး၊ဘာလို့လဲဆိုတော့သင်က်ပ္၊ပရောပနှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပင်ချိန်းတွေ့နှင့်အတူတစ်ခုတည်းစိမ်း။ ဒီအခမဲ့နှင့်ပျော်စရာလည်းရှိပါတယ်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအဘယ်မှာရှိလူတိုင်းစကားပြောနိုင်နှင့်ချိတ်ဆက်။ တဆင့်ရှာဖွေကြည့်ရှုဗီဒီယိုများလူများ၏အနီးအနားနှင့်အခြားတည်နေရာ။ သင်မြင်သောအခါသင်ကြိုက်သူတစ်ဦးကိုအသာပုတ်၊နှလုံးခလုတ်ကိုအောက်ခြေ၌လက်ျာ။ အခါသူတို့ကဲ့သို့သင်၊ကျောင့်အကိုက်နှင့်သင်စာသား။ သင်သည်လည်းတွေ့ဆုံရန်လူများအတွက်ထိုအုပ်စုချက်တင်ဧရိယာ(ညာဘက်ထိပ်)။ ကိုအသာပုတ်ပေါ်လူတွေရဲ့ပုံကိုအုပ်စုမှာဧရိယာမှဆောင်ခဲ့သူတို့ရဲ့ပရိုဖိုင်းသို့မဟုတ်ဆွံ့သူတို့ကိုစာလိပ်ဓာတ်ပုံတွေ၊ကလစ်၊ဗီဒီယို၏မိန်းကလေးများနှင့်ယောက်ျားတွေကမ္ဘာအဝှမ်းအထိ သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုရှာဖွေကြောင်းစိတ်ဝင်စားစရာ၊ထိုကဲ့သို့မိမိတို့ပို့စ်နဲ့ပြောမင်္ဂလာပါ။ သင်သည်လည်းတက်တွေ့ဆုံရန်နှင့်အတူနှာစိမ်းတွေအတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းနှင့်လူမှုရေးနှစ်ဦးစလုံးအတွက်နည်းလမ်းများ။ သူတို့ပြောတဲ့ပုံကတထောင်စကားများရကျိုးနပ်နှင့်ဗွီဒီယိုတစ်ခုသည်အနည်းဆုံးထောင်။ ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးတဲ့ဗီဒီယိုအခြေပြုလူမှုဒါင္းကြောင့်ဖျောပွနိုငျကိုယ့်ကိုယ်ကိုအများကြီးပိုကောင်းနှင့်အတူဗီဒီယိုနှင့်ရှာပြီးတက်တွေ့ဆုံရန်လူသစ်အများကြီးပိုမိုလွယ်ကူ။ မမေ့မလြော့ပါ:အခြားချိန်းတွေ့လီေ၊ကိုးရီးယားကင္ယာအခမဲ့ပေးနိုင်ပါတယ်လူတွေ့ဆုံရန်အနီးအနားမပါဘဲမည်သည့်အဖိုးအခ။ မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်ဖြစ်စေအနီးအနားမှာသို့မဟုတ်အတွက်ကမ္ဘာတဝှမ်းငါတို့အုပ်စုချက်တင်အခန်းပေါင်းသို့မဟုတ်အားဖြင့်အောင်ပွဲနှင့်အသုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပုဂ္ဂလိကပုံး။ အင်္ဂါ-ဗီဒီယိုချိန်းတွေ့-အျအုပ်စုစာသား-လူမှုအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း-ပုဂ္ဂလိကအတွက်အကွက်-ဝေစုအသံဖိုင်၊ဗီဒီယိုနှင့်ဓာတ်ပုံ-အောင်သစ်သူငယ်ချင်းများကိုရှာဖွေနေပါသည်ပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ချောမောရည်းစားသို့မဟုတ်ပူရည်းစားအတူချစ်ခြင်းမေတ္တာ၌ကျရောက်သို့မဟုတ်ပဲအတူချိတ်ဆက်၊ဤတစ်အလွန်ကြီးစွာသောရာအရပျရှာတွေ့ဖို့တစ်ဦးကလူတစ်ဦး၏ဆန့်ကျင်ဘက်သို့မဟုတ်တူညီသောလိင်။
အဘို့အရှာဖွေနေချိန်းတွေ့အလေးအနက်။ ရှာဖွေသင့်ရဲ့ရေရှည်မေတ္တာကိုအတူကိုးရီးယားချိန်းတွေ့-ဆီမီးတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဝက်ဘ်ဆိုက်အပေါ်အလေးပေးသောဆက်ဆံရေးနှင့်အလေးအနက်။ ချင်သူရဲ့သူတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်တဲ့အဖြစ်အများကြီးခွေးချစ်သူတွေအဖြစ်။ လိုအပ်တဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အတွက်ဘယ်သူ တိရစ္ဆာန်ချစ်သည်အဖြစ်နည်းတူအရေးလူ့အချစ်ဇာတ်လမ်း။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ခြင်း-ရွေးစင်မိန်းကလေးများဖြစ်ပြီးပြည့်စုံသောအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ခရီးကိုရှာဖွေဘို့သင့်လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်။ တရားဝင်အမည်မှာတတိယအကြီးဆုံးဘာသာတရားမှာအမေရိကန်တစ်ခုတည်းလုိမ်ိဳးေတြသတိမမူ။ မရှိတော့။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ခြင်း-ရွေးစင်မိန်းကလေးများကဒီမှာချိတ်ဆက်ဖို့ဗုဒ္ဓတစ်ဦးတစ်ယောက်အတွက်အလွန်ကောင်းမွန်သော အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ခြင်း-ရွေးစင်မိန်းကလေးများသည်အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အသုံးပြုသည်ဟူသောအသိဉာဏ်သွယ်အစည်းစိတ်အမေရိကန်တစ်ဦးတစ်။ အများအပြားနှင့်မတူဘဲအခြားအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊ကျွန်ုပ်တို့၏ပလက်ဖောင်းကြာအကောင့်သို့ရှိသမျှတို့သည်သင်တို့၏ဆက်ဆံရေးအလိုဆန္ဒနှင့်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာစရိုက်အားဖြင့်ကျယ်ပြန့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးစမ်းသပ်မှု။ ရလဒ်အနေနှင့်၊ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ခြင်း-ရွေးစင်မိန်းကလေးများတွေ့ဆုံရန်အပေါင်းတို့၏မျှော်လင့်ချက်များနှင့်လိုအပ်ချက်များချိန်းတွေ့အွန်လိုင်းထံမှ။ နေစဉ်တစ်ခုတည်းဘဝကိုကအများအတွက်ပျော်စရာအစဉ်ဖြစ်ခြင်း၊အတွက်အချစ်သည်အထူးအရာတစ်ခုခုရဲ့အဘယ်သူမျှမအံ့ဘွယ်သောအမေရိကန်တွေအခုမှလှည့်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များရှာဖွေရန်။ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ခြင်း-ရွေးစင်မိန်းကလေးများသည်အဖွင့်ရန်နေရာကောင်း။ ကျနော်တို့သေချာစေရန်လူတိုင်းအပေါ်ချိန်းတွေ့ဆိုက်ဖြစ်ပါတယ်အလေးအနက်အတှကျရှာဖွေရေးနှင့်ပတ်သက်။ ကျနော်တို့ကိုင်ကျွန်ုပ်တို့၏အဖွဲ့ဝင်များဖြစ်သည့်တိုင်းဒေသကြီးအရေအတွက်လိမ်လည်မှုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးတိုင်းတာရန်အရပျ၌အာမခံသင့်ရဲ့အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဖောက်သည်စောင့်ရှောက်မှုအဖွဲ့ကလည်းအနှံကိုခံရစေ့စေ့အားလုံး၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြေမည်သည့်မေးမြန်းချက်သင်အတွင်း။ မှာ ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ခြင်း-ရွေးစင်မိန်းကလေးများ၊ငါတို့သည်သင်တို့အဘို့အရှာဖွေချစ်ခြင်းမေတ္တာဖို့ရုန်းကန်ဒါပေမယ့်ပျော်စရာ-မေတ္တာ၌ကျသွားသည်ကြီးနှင့်ကျနော်တို့ဒီကိုသင်တို့အားသတိပေး၏။ ကတည်ထောင်ရှင်းလင်း၏ဦးစားပေးအဘယ်အရာကိုသင်ရှာဖွေနေအဘို့အမိတ်ဖက်အတွက်။ ဒီဘက်ပါ၊သင်ဖော်ထုတ်ပြီးအတိအကျအဘယ်အရည်အသွေးသင်ရှာတစ်စုံတစ်ဦးအတွက်။ ဒါကြောင့်နောက်ပိုင်းတွင်အရေးကြီးရွေးတစ်အလေးအနက်ချိန်းတွေ့ဆိုက်အဆင်ပြေနိုင်ပါတယ်နှင့်ပေးထားသင့်ရှာဖွေရေးအတွက်သင်အကိုက်ညီဆုံးအကောင်းဆုံးတစ်ဦးချိန်းတွေ့ဆိုဒ်ကိုရှင်းလင်းစွာသတ်မှတ်သင့်ရဲ့ဦးစားပေးဘို့အသင်၏နောက်ဆက်ဆံရေး။ ဆိုဒ်တစ်ခုလိုပဲကျွန်တော်တို့ကို။ လက်ခံသူအဘို့အသင်အားဖြင့်သင့်ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ဦးအတွက်မရှိမဖြစ်အစိတ်အပိုင်းများ၏အဆောက်အဦကိုကြာ။ အားလုံးအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုဒ်များ၊၎င်း၏့အရေးကြီးကြောင်းတဦးတည်းကိုရွေးချယ်ဖန်တီးရန်ခွင့်ပြုထားတဲ့ပရိုဖိုင်းအပ္တဲ့ဖမ်းယူသင့်ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေး။ ဒါဟာသင့်ချိတ်ဆက်သင်လူတို့နှင့်အတူသင်အမှန်တကယ်ဖြစ်ချင်ချိန်းတွေ့သင့်ရဲ့မျှော်လင့်ချက်များဖြည့်ဆည်း။ သေချာအောင်သင့်ရဲ့ချိန်းတွေ့ဆိုက်တွေ့ဆုံသင့်ရဲ့လုံခြုံရေးဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များလည်းမဖြစ်လိုအပ်သောလုပ်ငန်းစဉ်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့၏။ သင် ဖြစ်ချင်ကအာမခံသင့်ရဲ့ဒေတာတွေကိုနှင့်ဘေးကင်းလုံခြုံခြင်းနှင့်လုံခြုံ။ ၏ရည်ရွယ်ချက်နှင့်အတူရေရှည်ဆက်ဆံရေးအတွက်စိတ်တော့ချိန်းတွေ့ဆိုက်ကိုသင်ရွေးချယ်သင်ကူညီနိုင်၊သင့်ရဲ့ဦးစားပေးရေးမိတ်ဖက်ဦးစားပေး၊ဒါကြောင့်သင်အပေါ်အာရုံစူးစိုက်နိုင်တက်ပြင်ဆင်ခြင်းအစည်းအဝေး။ စောင့်ကြည့်နေတာပါလျှင်သင်ပျော်ရွှင်သော၊ရေရှည်တည်တံ့သောဆက်ဆံရေး၊ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့ခြင်း-ရွေးစင်မိန်းကလေးများအမှန်တကယ်သည်သာအအွန်လိုင်းချိန်းတွေ့ဆိုက်သင်တို့အဘို့။ ပေးအခွင့်အလမ်းအားဖြင့်ယနေ့ဖြည့်စွက်အ
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳရီးယားချိန်းတွေ့အကြံပေးချက်များ။ စစ္ေအောက်ဖတ်ရှုဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ထိပ်တန်းနှင့်ချိန်းတွေ့ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးချိန်းတွေ့ကိုးရီးယားအမျိုးသားနှင့်ဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာ။ ကလဲ့စား၏ နေ့ယောက်ျား၏ရာပေါင်းများစွာနှင့်အမျိုးသမီးလက်စားချေရှာအပေါ်၎င်းတို့၏ဖြစ်သူ-အိမ်ထောင်ဖက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်တွေအမျိုးမျိုး၊များသောအားဖြင့်ဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်သူတို့ရောက်စွန့်ပစ်သို့မဟုတ်ဘယ်မှာအပေါ်မှာလိမ်လည်လှည့်။ ကလဲ့စားလာနည်းလမ်းများစွာအတွက်။ ဒါဟာပုံမှန်အားဖြင့်စတင်သည် သုံးပြီးလူမှုမီဒီယာမှပေါက်တွေ၊ပြီးတော့အရှိန်အရပ်မှ။ ယခုကဲ့သို့ဆိုက်များကိုအရအပေါ်ကလဲ့စားချေသင့်ရဲ့ရည်းစားဟောင်းများအတွက်အခကြေးငွေရကူညီနိုင်လိမ့်မည်ဟုပြန်ဆပ်သို့မဟုတ်ကလဲ့စားချေ။ ဒါကြောင့်၊အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဆိုတာဘာလဲရကလဲ့စားကိုလှီးအပြင်သူမ၏တာယာ၊တင်ဝတ်လစ်စလစ်ဓာတ်ပုံများသူမ၏နှင့်ဒါကြောင့်အပေါ်။ အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းအရအဆိုပါဝဘ်ဆိုက်ညာဖက်ရွေးချယ်မှုသည်အသက်ရှင်၏အသက်တာ။ ဤသည်အဘယ်သူမျှမနေပါစေသင်၌နေသောသူအပေါ်ကလဲ့စားချေရှာကြံ။ လုပ်ဖော်၊အလုပ်ရှင်၊မကောင်းတဲ့မိတ်ဆွေများကသို့မဟုတ်ဖြစ်သူ-မိတ်ဆွေတို့ကို။ သင့်ရဲ့စွမ်းအင်သို့မြင်နှင့်ပျော်မွေ့သင့်အသက်၊သင့်ရဲ့အချိန်ကိုဖြုန်း၊စွမ်းအင်နှင့်အရင်းအမြစ်များအပေါ်လက်စားချေသောကုန်ကျအဆုံးသတ်သွားနိုင်ပါတယ်သင်အများကြီးပို။ အပေါင်းအခါ၊၊သင်ရှာလက်စားချေ၊သင်ကသူတို့ကိုပို့တစ်ဦးအနှိပ်ရှိသည်သောမဆည်းပူးကျော်ဆက်ဆံရေး။ ၎င်း၏အမွီအများကြီးပိုကောင်းဖြစ်ကြောင်းပြသစိုက်နှင့်တီ။ အရဘောကစားခြင်း ၏နိုင်ငံခြားကိစ္စ၊တစ်ဝန်ဆောင်မှုအတွက်အထူးပြုကူညီယောက်ျားငယ်ရွယ်လှပသောနိုင်ငံခြားအမျိုးသမီး၊အကောင်းဆုံးလက်စားချေသည်အရက်စွဲသို့မဟုတ်လက်ထပ်အမျိုးသမီးနှစ်ထက်ငယ်ရွယ်သူ။ ဤအမည်ဟောင်းသူမ၏ပယ်ရန်မကုန်မဆုံး။ အဘယ်သူမျှမအစဉ်အဆက်အမျိုးသမီး ဖြစ်ချင်စားထိုးနှင့်အတူအငယ်၊ပိုပြီးဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီး။ ကိုယ့်ကြိုက်တဲ့လူကြိုက်ဘူးရဖြင့်အစားထိုးသူတစ်ဦးကောင်လေးသည်ချမ်းသာရန်အောင်မြင်။ ငါဘယ်တော့မှမေ့လိမ့်မည်တအကြှနျုပျ၏ပထမဦးဆုံးဖောက်သည်ယူစိန့်ပီတာစဘတ်၊ရုရှားနိုင်ငံ။ ေျပာ ၊ကိုလိုင်းကြောင်းကျွန်မကိုပြောပြတယ်နှစ်ရက်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ခရီးစဉ်ကောင်းထက်နှစ်နှစ်၏ကုထုံး။ ရာပေါင်းများစွာရှိခြင်း၏ဆွဲဆောင်မှုအမျိုးသမီးကျော်တိုက်ပွဲသင်ရရှိသူသင်သည်သင်၏စိတ်၏ထွက်တော်တော်လျင်မြန်စွာ။ ငါပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရတက်မချိုးအခါငါ့ဟောင်းပြေးနှင့်အတူ။ တိုတောင်းသောအချိန်ကြာ၊ငါအသစ်တစ်ယောက်သောသူတဆယ်ကြိမ်။ ငါပြေးသို့လူကိုခိုးယူသူကိုငါ့ဟောင်းနှင့်ငါသူ့ကိုပေးကြီးမားတဲ့ကျေးဇူးတင်စကား။ တကယ်တော့၊ကျွန်မသူ့ကိုကျေးဇူးတင်ပါနိုင်ဘူး။ သူဝဲနှင့်အတူတစ်ဦးအဟောင်းတွေနေကြတဲ့အမျိုးသမီးနေစဉ်၊ငါအခုနှင့်အတူလူငယ်တစ်ဦး၊လှသောအဆင်း၊အမျိုးသမီးစောင့်ရှောက်။ အပေါင်း၊ငါ့ဟောင်းရကပေါင်။ ငါတီမှာအဖွဲ့ဝင်အဖြစ်မည်သည့်အမျိုး၏ရန်သူဒါပေမယ့်ဖြစ်သူမှငါ့ကိုကယ်တင်ငါ့ဟောင်းနှင့်သက်မှုများခံစားနေရ၏နှစ်ကြာ။ ဤသည်အကောင်းဆုံးတစ်ဦးလက်စားချေသည့်အခါသင်အနိုင်ရမပါဘဲလျှော့ချ။ အခြားဆိုဒ်များ သူမ၏ကျော်ရနှင့်အခုပေးပြီးလက်တွေ့ကျအကြံဉာဏ်နှင့်အကြံပြုချက်များမေ့ကျော်အတိတ်ဆက်ဆံရေး။ ထိပ်တန်းအကြံပေးချက်များမှသူမ၏ကျော်ရနှင့်ယခု:အောင်စတင်ယာက်ာၤးေဆက်ဆံရေးနှင့်အတူအမျိုးသမီးများစွာဖြစ်နိုင်၊အဟောင်းများ၊လူငယ်၊ပိန်လှီသော၊အဆီ၊ချစ်စရာအရုပ်ဆိုး။ ဒီကိုအလွန်အထောက်အကူရဖို့အတွက်ဂိမ်း၏လူမှုရေးနှင့်အတူဆန့်ကျင်ဘက်လိင်။ ကိုဖွင့်လှစ်ခြင်းနှင့်ဝန်ကတက်စာရေးခွင့်အလမ်းများဖြည့်ဆည်းဖို့သူတို့ရဲ့ချစ်စရာဆွဲဆောင်မှုမိတ်ဆွေများအတွက်ပိုပြီးအေး။ ဤသည်ကိုလည်းသင်ကူညီပေးသည်တည်ဆောက်သင့်ရဲ့ဂိမ်းနှင့်ယုံကြည်စိတ်ချမှု။ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုတိုးတက်လာခြင်း၊အထဲကအလုပ်လုပ်၊စောစောထရနှင့်သင်နေ့တိုင်းလေ့ကျင့်ခန်း။ အသစ်မဝယ်။ သင်းလုံးကကစားသမားပိုကောင်းခံစားရစေသည်ကောင်းစေခြင်းနှင့်တိုးတက်ကောင်းမွန်အများ၏ယုံကြည်စိတ်ချမှု။ အပေါ်အာရုံစူးစိုက်၊အလုပ်လုပ်ရတဲ့အမြှင့်တင်ရေးသို့မဟုတ်မြှင့်တင်ရန်။ မနေပါစေတီတစ်ချိုးတက်ကျိုးသင့်အလုပ်အပျက်သဘော။ ထားကြောင်းအပိုအားထုတ်မှုသို့အလုပ်ကြောင့်ချွတ်ချေမည်နှင့်အတူပိုကောင်းတဲ့အနေအထားနဲ့ပိုပြီးငွေရှာ။ ဒါကလည်းသင်တို့၏ယုံကြည်မှုတည်ဆောက်ကူညီဆွဲဆောင်ပိုကောင်းအရည်အသွေးမျိုးသမီး။ မည်သည့်အချိန်ဖြစ်ကြောင်း၊စိတ်ဓာတ်တိုးတက်အောင်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအလွန်ကူညီပေးသည်။ အခါစိတ်ဓာတ်ကျခံစားရပါ၊တီထိုင်ပြီးရီတီနှင့် ထိုအခါအိပ်-နှောင်းပိုင်း။ ရထဲကတစ်ခုခုလုပ်လိမ့်မည်ကဲ့သို့သင်တို့ခံစားရပါစေ။ဘာသာျပန္ခ်က္လုံးစုံသောအရာတစ်ခုခု။ ယူတဲ့အတန်းအစား၊သွား၊တောင်တက်၊အရာတစ်ခုခုပြုပြင်သင်ခဲ့ကြပယ်ချ။ ဘူးတီစတင်သောက်သုံး။ သောက်မြဲအပျက်သဘောဆောင်သောအကျိုးသက်ရောက်မှု၏အသက်တာအပေါ်။ ဘူးတီသောက်နေစဉ်ဓာတ်ကျသို့မဟုတ်မအခါသင်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်အကျော်ရဖို့တစ်စုံတစ်ဦး။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊အရက်သောက်အတွက်အောင်ပွဲခံ။ ဒါကြောင့်၊သင်တို့သည်မဖြစ်ကြလျှင်ကျင်းပမၾတီ။ အရည်အသွေးမျိုးသမီးသည်ခံရဖို့မသွားဖို့စိတ်ဝင်စားသောသူတစ်စုံတစ်ယောက်အချိုရည်တွေအများကြီးသို့မဟုတ်အရက်သောက်ပြဿနာ။ ဘူးတီအိပ်သာအိပ်တိုးပွါး။ ရတက်အဖြစ်အစောပိုင်းနှင့်လမ်းလျှောက်သွား၊တစ်တိုးမြှင်ယူ၊ဒါမှမဟုတ်အားကစားရုံကိုသွား။ သုတေသနပြသဆိုတော့စောစောထပြီးလေ့ကျင့်ခန်းဖယ်ရှားပစ်နိုင်ပါတယ်။ သင်ရှိသည်လိမ့်မည်မျှဂိမ်းဖြစ်ဓာတ်။ နိဂုံးချုပ်၊အကောင်းဆုံးလက်စားချေသည့်အခါသင်သည်သင့်အသက်တာကိုပိုမိုကောင်းမွန်ထို့ကြောင့်ကောင်းစွာသဘောပေါက်သူမသည်ကြီးမားတဲ့အမှား။ ပီတိနဲ့ကျေနပ်မှုကိုကြွလာသောအခါသင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးတွေ့ဆုံရန်ဒါကြောင့်အများကြီးပိုကောင်း၊သင်အဘယ်သို့ပြုမည်အဟောင်းသွားပြီဖြစ်ပါတယ်။ ပြီးနောက်ရှိသမျှတို့၊သင်လျှင်လက်စားချေရှာကြံ၊ဘယ်လိုကြီး သူမတကယ်ရှိပြီးပထမနေရာအတွက်။ ဘယ်လောက်ရယ်စရာအကြံပေးချက်များအကြောင်းဆိုတော့အပေါ်ကလဲ့စားချေ၏ဖြစ်သူတက်အဆုံးသတ်အတွက်ကွန်ရက်စာမျက်နှာများအတွက်အကြံပေးချက်များအပေါ်ဘယ်လိုရက်စွဲအမျိုးသမီး။
အပြန်ခုန်နှုန်းဖော်ပြ၏အချိုးအဝင်မက်ဆေ့ခ်ျများသို့ပြန်ကြားချက်။ အကယ္ပြန်ကြားချက်မှုနှုန်းနိမ့်သည်၊ဒါကြောင့်နည်းလမ်းများကြောင်းအသုံးပြုသူမရှိသလောက်ပြန်ကြားချက်။ ရဲ့လျှင်အမြင့်ဆုံး၊အသုံးပြုသူအများကြီးပိုဖွယ်ရှိသည်ပြန်ကြားချက်။ ဓါတ္ပံုမ်ားကိုခဲ့ကြကြောင်းမှတ်အဖြစ်ဂုဏ်ကိုသာအားဖြင့်ကြည့်ရှုကြသူအသုံးပြုသူများမှအမြင်ဆှအကြောင်းအရာ။ သင်အကြောင်းကိုပိုမိုဖတ်ရှုနိုင်ဒီကိုပြောင်းလဲသင့်ရဲ့ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုအပိုင်းမှာဆိုရင်အထိမ်းအမှတ်ဓာတ်ပုံအဖြစ်ဆှ၊ဒါဟာသာမြင်နိုင်ကြသူအသုံးပြုသူများမှသဘောတူကြည့်ရှုရန်နှိုးဆှအကြောင်းအရာ။
အရာခပ်သိမ်းသည်အလွန်ပွင့်လင်းနှင့်အတူအတွက်တကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြ၏။ ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်သိကောင်းစရာများ။ သင့်ဆိုဒ်အသုံးဝင်သည်။ အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ ရှီစကားပြောသည့်နိုင်ငံတကာလူမှုကွန်ယက်အားဖြင့်ကမ်။ စကားပြောနှင့်တွေ့ဆုံရန်မှလူအပေါင်းတို့သည်ကမ္ဘာအနှံ့တွင်ဒီ အခြားရွေးချယ်စရာအခမဲ့ ။ သင်ဟာအနည်းဆုံးရှိရမည်အသက်ဝင်ရောက်ဖို့ဒီဝဘ်ဆိုက်။ ရှီချက်တင်အတွက်တာဝန်မမှားလုပ်ရပ်၏မည်သည့်ဧည့်သည်အဖြစ်လိမ့်မယ်လို့အကြောင်းဒီအပေါ်။ ရှီစကားပြောမှမထောက်ခံပါဘူးသို့မဟုတ်ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုကြသည်မှမည်သည့်အကြောင်းအရာသည်ထုတ်လွှင့်မှတဆင့်ဤ။ အရာခပ်သိမ်းသည်အလွန်ပွင့်လင်းနှင့်အတူအတွက်တကယ်ကိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းရှင်းပြ၏။ ဒါကြောင့်အမှန်တကယ်သိကောင်းစရာများ။
အနည်းငယ်တုန်းကကိုရီးယားမှာနေစဉ်ထွက်ဆွဲထားနှင့်အတူငါ့အစ်ကိုဝမ်းကွဲ၊တစ်ဦးအလွန်အအရပ်ရှည်ရှည်နှောင်းပိုင်းအမ်ိဳးမ်ိဳးမွလူနှင့်အတူကောင်းတစ်ဦးအသက်မွေးဝမ်းကျောင်း၊အရိယာမိသားစုဆွေ၊နှင့်ယေဘုယျအားဖြင့်အလွန်ကောင်းတဲ့ကောင်လေးက”လာမကျင့်ရ။။။။”သူတုန့်ပြန်နှင့်အတူ”ငါအရပ်ရှည်ရှည်အဖြူရောင်မိန်းကလေးများနှင့်အတူကြီးမားတဲ့ရင်သား။”ရိုးရိုးသားသားပြောရရင်၊ကျွန်မအထင်ဒါဟာစူပါဘုံ၊ဒါပေမယ့်တည်ရှိပါဘူး။ မှကြွလာသောအခါမ-ကင္မ္ခ်ီ၊ကင္မ္ခ်ီယေဘုယျအားဖြင့်ဒဏ်ငွေနှင့်အတူအခြားအာရှ။ အဘယျသို့ပေမယ့်အခြားမွတ္ခ်က္မ်ားပြော၊တိုင်းပြည်အတွင်းဘက်မှာပိုပြီးအစဉ်အလာအိမ်ရှိရာပထမဦးဆုံးအသားနဲ့အတူမိသားစုဦးခေါင်းအဖြစ်။ အားလုံးသမီးအားလုံး၏အမိသားစုများပြောင်းရွှေ့ဖို့အမြို့မြို့၊အရှင်မရှိလူငယ်အမျိုးသမီးအတွက် ကျေးလက်။ ဤကဲတို့သည်ဤသို့ကြည့်ရှုပြင်ပနိုင်ငံမကြာခဏအရပ်ကဲ့သို့ဗီယက်နမ်၊ဖိလစ်ပိုင်၊မွန်ဂိုလီးယား၊တရုတ်နိုင်ငံ။ စသည်တို့ကို။ သောအရပ်တို့ကိုရှိသူအမျိုးသမီးကြည့်ယားလုံလောက်ကြောင်း၊အလားတူယဉ်ကျေးမှုသမိုင်းကြောင်းစသည်တို့ကို။ ကိုရီးယားမှာ၊သင့်မိသားစုနှင့်ဆွေအောက်ပါအတိုင်းလူအားဖြင့်၊တစ်ဦးလျှင်ကိုးရီးယားလူကိုလက်ထပ်အမျိုးသမီး၊ကလေးတွေကို ဆက်လက်မယ်လို့ဝတ်ဆင်သူ၏မိသားစုဆွေ၊ဒါကြောင့်တကယ်မရှိကြောင်းအရာကိုင်ထားမယ်လို့တစ်စုံတစ်ဦးပြန်လည်းလူအများစုဖြစ်ကြသည်မဟုတ်တစ်မိသားစုထံမှအဆွေအမျိုးနှင့်အစိတ်အပိုင်းသည်ကိုသတိပြုဖို့လုံလောက်တဲ့အမှန်တကယ်အကျိုးသက်ရောက်မှုသူတို့ချိန်းတွေ့နှင့်ရွေးချယ်မှုတော်တော်ကြီးသာအရိယမျိုးနွယ်စုသို့မဟုတ်တော်ဝင်စစ်အာရုံစိုက်ရန်ဤအမှုအရာ။ သို့မဟုတ်ပင်သာအရိယာတာ္အပိုင္းကိန္း၏ဤအဆွေအမျိုး။”အကြားအမျိုးသားများအတွက် စုံတွဲများ။ ရာခိုင်နှုန်းဘူးမ်ားအားဖြင့်နောက်တော်သို့လိုက်၊တရုတ်နှင့်အတူ။ ရာခိုင်နှုန်း၊အမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမှာ။ ရာခိုင်နှုန်းနှင့်ဂျပန်မှာ။ ရာခိုင်နှုန်း။ အကြားအမျိုးသမီးရာခိုင်နှုန်းရှိခဲ့တရုတ်နိုင်ငံသား၊ဘူးမ်ားကိုယူ။ ရာခိုင်နှုန်း၊ဗီယက်နမ်ခဲ့ကြသည်။ ရာခိုင်နှုန်းနှင့် ။ ရာခိုင်နှုန်း။”ငါတော့မထင်ဘူး။အထိဆိုကင္မ္ခ်ီ ဒါပေမယ့်သင့်ရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်။ အဆက်သင်သည်အဘယ်သို့သင်အမှန်တကယ်ချင်တယ်ဆိုရင်ရက်စွဲအတွက်တ? ရုံသင်လိုချင်တဲ့အတိုင်း။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ငါဂရုမစိုက်ပါဘူးအခြားအဘယ်လူအထင်နဲ့ပြောသောကြောင့်၊ကျွန်မရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်သည်အရေးပါသည်။ အချို့ကင္မ္ခ်ီကြိုက်မပြုစေခြင်းငှါအင္ငံျခားသားမ်ား၊ဒါပေမယ့်အခြားသူများကိုပြုစေခြင်းငှါ။ ဒီဂလိုဘယ်ခေတ်၊လူမျိုး၊လိင်နှင့်အသက်အရွယ်မထင်ကြဘူးအဖြစ်အရေးကြီးတယ်။ နည္းပညာတိုး၊လူလွယ်တကူကျော်အချို့ ကဲ့သို့အကွာအဝေး၊ဒါမှမဟုတ်ဘာသာစကားများအသုံးပြုခံရဖို့ကြီးမားတဲ့အမှတ်တရ။ လူမျိုးနိုင်ရေးပင်လျှင်သူတို့ကွဲပြားခြားနားယဉ်ကျေးမှုနောက်ခံ။ ငါပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးမရှိပြေလူနှစ်ဦးအကြားနေသောကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများအနေဖြင့်ဒါပေမယ့်ပိုပြီးအရေးကြီးလိမ့်မယ်လို့ရှိမရှိသူတို့အချင်းချင်းချစ်ကြ။ ရှိရမယ်အချို့ပြဿနာများကိုဤအမှု၌ဒါပေမဲ့အခုလိုဖြေရှင်းဖို့အတူသင့်ရဲ့ဆက်ဆံရေးတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးသင့်အိမ်ထောင်ဖက်။ အဲဒီလိုလုပ်ဖို့၊ငါ၏ယခင်အတွေ့အကြုံ၊အရည္အခ်င္းပထမဦးဆုံးခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်လိုအပ်မှရယူများအတွက်ပိုမိုကောင်းမွန်သောဆက်သွယ်ရေး။ ဒါဟာအဆန်းဖြစ်ပါတယ်ရီးယားဒီဖြစ်ပျက်ဖို့ရှိပါတယ်အဖြစ်ဆဲမဘူးမ်ား ဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာရှိသောမိဘများဖြစ်ကြမှဆန့်ကျင်။ သို့သော်၊လျှင်အကောင်လေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်နေထိုင်ခဲ့သို့မဟုတ်စိုက်ပျိုးအတွက်အနောက်တိုင်းလူ့အဖွဲ့အစည်းသူဖြစ်ဖို့ပိုဖွယ်ရှိစြဲမူ-ကိုးရီးယားနှင့်မိဘတွေကများသောအားဖြင့်အဖြစ်ဤအတူအိုကေ။ ဟုတ်ပါတယ်၊ဒါကြောင့်တစ်ဦးချင်းစီအပေါ်မူတည်ပြီးမိဘရဲ့ရပ်တည်ချက်။ ဒါဟာအများကြီးကွဲပြားပါတယ်။ ငါ့အအကြံပြုချက်မပူတောင်းကိုရီးယားကောင်လေးတစ်ယောက်ထဲကမေမယ်လို့အဖြစ်အဆိုးဆုံးအရာဖြစ်ပျက်နိုင်ကြောင်းဒါကြောင့်အဘို့အသွားဟုတ်ကဲ့၊သူတို့ပြု။ ငါတစ်ယောက်နှင့်ချိန်းတွေ့အခုအချိန်မှာကျွန်တော်တစ်ဦးအတန်အသင့်-အညိဳေရာင္-ခံရသညျ့အရှေ့တောင်အာရှမိန်းကလေးတစ်။ ငါဘယ်တော့မှမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်ဖြစ်ချိန်းတွေ့ယားကောင်လေးနှင့်ကျွန်တော်မကြီးအဘို့ရှာ-ရည်းစား။ အပေါင်း၊ဤအမှုသည်ငါ့ပထမဦးဆုံးအကြိမ်အဖြစ်ချိန်းတွေ့အလုပ္လုပ္ခြ။ သင်ဆိုရင်မ-အျဖဴေရာင္၊အရင်ရှာဖွေကိုရီးယားကောင်လေးကိုရီးယားမှာမည်ဖြစ်တစ်နည်းနည်းခက်ခဲပုံရယူဆမှောင်-ခံရသညျ့လူလျော့နည်းကောင်းစွာပယ်သို့မဟုတ်လျော့နည်းတတ်သည်။ အဲယ့္ၿ၊ဟုတ်ကဲ့၊သင်မူကား၊ရှိသည်ကိုရီးယားမိတ်ဆွေတွေသူလုပ်နိုင် 소개팅 သင်တို့အဘို့အ၊ဒါမှမဟုတ်သင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းအစည်းအဝေးတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အသင့်လျော်သောဖြစ်လိမ့်မည်။ သို့သော်၊ည့္ရေအာင္ ဆိုဒါဟာအားလုံးအခြေအနေပေါ်မူတည်ပြီးဦးစားပေး။ အဖြစ်ကျွန်တော့်အတွက်၊ငါပြောတယ်လို့ဗမာနှင့်လျောက်ပတ်ကိုးရီးယား။ ငါ့ရည်းစားနဲ့ကျွန်မအများအားဖြင့်ဆက်သွယ်ပြောဆိုကိုးရီးယားမဟုတ်လျှင်ကျွန်မတို့ပြောဆိုဖို့လိုအပ်ကြောင်းအလေးအနက်နှင့်အငါမကိုင်တွယ်နိုင်ပါအဆင့်မြင့်ကိုးရီးယား။ ငါ့အချစ်ကအသက်ရှင်ဖို့လာမယ့်ငါ့တိုင်းပြည်အတွက်ဒါကြောင့်၊ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူအဖြစ်အတူတူအတွက်တသူသာအသက်ရှင်ရန်အလိုတွင်ရီးယား။ သူသည်အစဉ်အမြဲအလေးအနက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးကတည်းကကျွန်မတို့ပထမတွေ့ဘူး။ (တယ်သိမှတဆင့်သူ့ကိုဘာသာစကားတစ်ခုလဲလှယ်အက္ပ္ကို၊ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့တွေ့ဆုံရီးယားမှာနောက်အခါအားလပ်ရက်အပေါ်)။ ဒါကြောင့်၊ဟုတ်ကဲ့၊ကိုးရီးယားအမျိုးသားများအလုပ်ရက်စွဲနိုင်ငံခြား။ ထောင်ပြု၊သို့သော်၊တစ်ဦးကွဲပြားခြားနား။ သူရဲ့အလေးအနက်ကြောင်းထင်နေတဲ့သူ့ရဲ့အလားအလာထောင်ရေးလုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်၊အကယ်စင်စစ်သင်တို့သိရကြကုန်အံ့။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကျော်၊ငါရှိခဲ့ဖူးပေါ်တက်ကောက်နေတစ်ဦးလက်တဆုပ်စာ၏”လမ်းကြောင်းအတွက်”ဒီဇိုင်း။ ငါအကြောင်းပြောနေတာမဟုတ်ပါဘူးတစ်မူထူးခြားရှိမရှိ၏ထုတ်ကုန်သို့မဟုတ်အမှတ်တံဆိပ်ဒီဇိုင်းကို၊ကျနော်တို့ကနေမျက်နှာသို့ရွေ့လျားနှင့်ပိုပြီးစေ့စေ့စနစ်များနှင့်လုပ်ငန်းစဉ်များ၊ပြီးတွေ့ဆုံဆွေးနွေးဖြစ်တယ်။ သော်လည်း၊အနြေ္ဒလီပေးတော်မူပြီ ကောင်းသောအဖြေ။ ကိုးရီးယားရက်စွဲများများသောအားဖြင့်ကိုရီးယားသို့မဟုတ်အခြားအအရှေ့အာရှနှင့်တောင်-အရှေ့အာရှ။ ကင္မ္ခ်ီအတော်လေးသန့်များအတွက်ကျွန်ုပ်တို့၏ကိုယ်ပိုင်။ သို့သော်၊ဒါဟာဆိုလိုခြင်းမဟုတ်တိုင်းတစ်ဦးချင်းစီကိုအောက်ပါအတိုင်းတူညီတဲ့နိယာမ။ တချို့ကကြိုက်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ရှိပါတယ်နေဆဲအများကြီးဖဴစိုးမိုးရေးအကြားကိုးရီးယား၊သို့သော်အချို့လူများကဲ့သို့အရောင်င္ငံျလူအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ဥပမာအားဖြင့်၊ဒါကြောင့်ကျွန်မအကြောင်းမစိုးရိမ်။ အချို့သောကိုးရီးယားတကယ်ချစ်။ သော်လည်းမဟုတ်၊ဒါပေမယ့်အကယ်စင်စစ်၊သင်တွေ့လိမ့်မည်သူတစ်ဦးအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ဒါဟာသင်တို့နေရာပေါ်မူတည်။ ကိုးရီးယားအမ်ိဳးမွေးဖွားသို့မဟုတ်အပြင်းပြည်ပမှာ၊သူတို့ကျိန်းသေချိန်းတွေ့မ-ကိုးရီးယားအမျိုးသမီးထက်ပိုပြီးကိုးရီးယားအမျိုးသားများအနေဖြင့်တောင်ကိုရီးယား။ အခုအတွင်းကိုရီးယား၊အမ်ိဳးလိမ့်မည်ရက်စွဲနှင့်လက်ထပ်ခြားအာရှအမျိုးသမီးဆိုရင်”မ”ကိုရီးယားအမျိုးသမီး။ အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးလာပြီးနောက်အခြားအာရှအမျိုးသမီး။ အနက္ေရာင္၊လက်တင်၊အရပ်များ၊စသည်တို့ကို။ ကျနော်တို့အနေနဲ့မလိုအပ်ပါဘူးအကြောင်းပြောဆိုအဖြစ်ခံရမည်ဖို့နီးကပ်ကွဲလွဲချက်များထက်ဘုံအရာ ။ ဆာ:အပြားစာရင်းအင်းအတွင်းယားရှိသည်ဖြစ်ဖို့ဂရုတစိုက်လေ့လာသောကြောင့်အချို့ဒေသများ၌ကဲ့သို့ အလွန်မြင့်အဆင့်ရောထွေးလက်ထပ်ထိမ်းမြားပြီးသူတို့ထဲကအများစုဟာအရာမရှိခြင်း၏ကိုရီးယားအမျိုးသမီးဘယ်သူပဲထားခဲ့ပါကိုရီးယားကျေးလက်။
ကိုယ့်ဖို့သည်ဟုဆိုချင်ပြီအောက်ပါသင့်ဘလော့လအနည်းငယ်အဘို့နှင့်ယခုကယ်လို့သင့်ရဲ့ပို့စ်များ။ စလုံးသင်အမှန်တကယ်ကောင်းများလည်းပေးကမ်းနေတုန်းအလွန်ရည်မှန်းချက်၊အႏွစ္ကိုအကြံဉာဏ်။ ဒါကြောင့်၊အများအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကြီးများအပေါင်း၊သင်၏နှစ်ဦးဖြစ်ပုံရတယ်တကယ်ချစ်စရာအတူတူသင်ဆန္ဒရှိရှိသမျှကိုအကောင်းဆုံးများအတွက်နှစ်ပေါင်းများစွာသင်ရပါလိမ့်မယ်၊ရှေ့ဆက်အတူတူဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ရေးသားဖို့အတွက်မေးမြန်းဖို့တစ်ခုခု။ ငါစာဖတ်ခြင်းအများကြီးအပေါ်သောအရပ်တို့ကိုကောင်းစွာ၊ကင္မ္ခ်ီမဟုတ်ကိုပွင့်လင်းရန်အလွန်စကားပြောရန်အစိမ်းအတွက်ကျပန်းအရပ်။ အသာလမ်း(များ)ကိုအစဉ်အဆက်ဂိုးသွင်းအတူရက်စွဲတစ်ခုတဦးတည်းအားဖြင့်”စည်းအဝေး”သို့မဟုတ်”အတွေ့”။ ငါဘယ်လောက်သေချာမရယ်ဟုတ်မှန်ကြောင်းအတွက် ငယ်ရွယ်သောမျိုးဆက်။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်၊ကိုယ့်ရရန်ကြိုးစားနေသိရန်ဤကောင်လေးတစ်ဦးအနေဖြင့်အဘို့။ ရာ၊ဟာပြေးကြတဲ့အတွက်တူညီသောစက်ဝိုင်း၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တို့ရဲ့စက်ဝိုင်းဘယ်တော့မှစိတ်မတိုက်ဆိုင်။ ကျနော်တို့နှစ်ဦးစလုံးကစားအတူတူကစား၊ဒါပေမယ့်သူကအများကြီးပရော်ဖက်ရှင်နယ်၊နိုင်ငံတကာအဆင့်နေတုန်းကျွန်တော်ကများသောအားဖြင့်မြိတ်အပေါ်အသင်းနှင့်ပဲ အပျက်အတွက်အဖွဲ့အစည်းများအတွက်ဤအားကစား။ ငါမြင်ဖူးတယ်သူ့ကိုအကြိမ်စုံတွဲတစ်တွဲနှင့်ဆန္ဒရှိမှသူ့ကိုမသိရ။ သို့သော်၊ကျနော်ဘယ်လောက်သေချာမရယ်သည်ဤအစဉ်အဆက်ဖြစ်ပျက်သွားကိုစောင့်ရှောက်အဘယျသို့ငါမူကားအထက်ကပြောပါတယ်အတွက်စိတ်-ဟက်တာ။ ကျွန်တော်တို့ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးဘုံ။ ငါပင်မသိကြပါသောသူ၊သူ့မိတ်ဆွေတွေသို့မဟုတ်အရာ”အတွင်းစိတ်ကစက်ဝိုင်း”သူအတွက်အလုပ်လုပ်။ ကင္မ္ခ်ီဘူးကိုပြောဖို့သူစိမ်း(ကျွန်တော်သတိပြုမိဒီတာတစ်ဦးစုစုပေါင်းအ)။ ပုံကထူးဆန်းသည်မိန်းကလေးများလုပ်ဆောင်ဖို့အလှန်နှင့်အတူအမျိုးသား(သို့မဟုတ်ဒီတော့ကျွန်မကပြောသည်င်)။ အခုတော့၊လာမည့်အဖြစ်အပျက်အတွက်လအနည်းငယ်ငါပဲထွက်ရှာတွေ့ချင်ပါတယ်နေထိုင်တဲ့အတွက်ဟိုတယ်အညာသူအတွက်နေရာထိုင်ခင်းဆိုးလ်ရှိရှိပါတယ်၊နှင့်အနည်းငယ်အစားအရပ်တို့ကိုကျွန်ုပ်တို့ဧရိယာတစ်ဝိုက်၊ဒါကြောင့်ငါသေချာပါတယ်ကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီကတခြားသို့ဝင်တိုး။ ငါ စဉ်းစားတိုင်းဤကြီးစွာသောအခွင့်အဖို့စကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်ငါမြင်လျှင်သူ့ကိုလည္း(ငါ့ကိုးရီးယား အစားကန့်သတ်)။ အရာဖြစ်ပါတယ်၊ငါသည်အတော်လေးတုံချတုံနဲ့တင်ပယ်အခုကိုဖတ်ပြီးနောက်”ကင္မ္ခ်ီဘူးတကယ်ပြောဖို့သူစိမ်း”နှင့်အခြားအရာဖြစ်စေခြင်းငှါအတားအဆီးတစ်ခုအဖြစ်အံ့သောငှါအတူသူ၏ကြီးမားသောအုပ်စုအများ၏အသင်းအိမျထောငျ၊ဒါကြောင့်ဖြစ်စေခြင်းငှါတကယ်ထူးဆန်းဖို့စကားလက်ဆုံတက်ဒဏ်ခတ်။ ငါစဉ်းစားနေတာသော်လည်းကတည်းကသွားရောက်ကာအခြားနိုင်ငံများသို့ဖြစ်စေမိမိ၏အလုပ်အကိုင်နှင့်ရောနှောဖို့အတော်လေးနည်းနည်းနှင့်အတူဒေသခံအသိုင်း’ပရိသတ်ရှိလျှင်အဘယ်အကြောင်းဖြစ်စေခြင်းငှါ၊ပိုပြီးပွင့်လင်းစိတ်ထားကြောင့်ရိုသေလေးစားမှုအတွက်(၏အေျပာအစိမ်း)။ သို့သော်၊ကျွန်တော်မသေချာဘူး။ ဒါကြောင့်၊ကျွန်တော်မေးသည်တကယ်နှစ်ဦးအစိတ်အပိုင်း။)အပိုတိကျတဲ့တစ်ခုမှာဘယ်လိုချဉ်းကပ်ရန်ဤအထူးသဖြင့်ကောင်လေးနှင့်)အရေးတစ်ခုမှာဘယ်လိုချဉ်းကပ်အကောင်သူမကလိုလားနှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံဖို့အတွက်။ ကျွန်မသေချာမရယ်ဆိုရင်ဒီလိုဖြစ်စေမည်သည့်ခြားနားချက်ဒါပေမယ့်ငါပြောကန့်သတ်ကိုးရီးယားနှင့်ပါရှ(ရောတရုတ်အိန္ဒိယလူမ်ဳိးေ)။ လျှင်သေချာမဖြစ်ကြောင်းကိုဒီလို အလေးချိန်အပေါ်၌ငါ့အလှန်သို့မဟုတ်တစုံတခုကိုမျှ။ အရမ်းရယ်ရတယ်၊သင်၏ပို့စ်ကကင္မ္ခ်ီ။ ဖြစ်ကြ၏သေချာသောသူတို့သည်ရှက်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အတွက်ပြဇာတ်၊ဒီကောင်တွေသူများဖြစ်ကြ၏ ပထမဦးဆုံးနိုင်ငံခြားအမျိုးသမီးပိတ္စလူယောက်ျားတစ်ယောက်မွေးဖွားကြီးပြင်းအတွက်တောင်ကိုရီးယား၊နိုင်သူလမ်းကြောင်းနှင့်သူ၏ကိုရီးယားအဘိုးကို၊တူ၏၊အသန်းအဆက်အၾကာက။
ငါချိန်းတွေ့အတွေ့အကြုံပြီးပြည့်စုံအရှုံးနိမ်အထိကိုရီးယားမှာ။ တကယ်လိုအပ်မှပေးတက်ရတယ်။ ၏မိတ်ဆွေများဖြစ်ပါစို့။ မင်္ဂလာပါယောက်ျားတွေ။ နောက်ဆုံးကျွန်မယုံကြည်တယ်ကျွန်မရည်းစားအချစ်သူနှင့်တွဲတော့ဒီမှာက။ ငါသိမပြုစေခြင်းငှါပြုမိပါပြီအခါတိုင်း။ ငါသာစောင့်ကြည့်တ။ ငါမချစ်သို့မဟုတ်ယဉ်ကျေးမှုကျွမ်းကျင်သူ၊ကျေးဇူးပြု။၊ငါ၏ထင်မြင်ချက်နှင့်အကြံအစည်၏ဘောဇဉ်နှင့်အတူဆား။ ပြီးပြီရှယ်ယာများသူမ၏အတွေ့အကြုံနှင့်အတူချိန်းတွေ့ကိုးရီးယားအမျိုးသားနှင့်ယောက်ျားတွေကိုရှောင်ရှားသင့်ချိန်းတွေ့စဉ်အခါ၌တောင်ကိုရီးယား။
ကစားတဲ့စကားပြောအခမဲ့ဗီဒီယိုလူမှုကွန်ယက်ဘယ်မှာသင်သည်ချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာမိတ်ဆွေတွေနဲ့အတူကျပန်းတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏ကမ္ဘာအနှံ့မှ။ အဘယ်သူမျှမ။ ကစားတဲ့စကားပြောနှင့်အတူအလုပ်လုပ်တယ်ဆိုမီးေကူျဝက္ဘ္ဘေရာက္ဇာမပါဘဲဒေါင်းလုဒ်သို့မဟုတ်တပ်ဆင်မည်သည့်ဆော့ဝဲ။ သင်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ကစားတဲ့စကားပြောသွားခြင်းအားဖြင့်အကစားတဲ့စကားပြောခန်းဝက်ဆိုက်သို့မဟုတ်အခြားမည်သည့်ဆိုဒ်ကမ်းလှမ်းသောကစားတဲ့စကားပြောခန်း။ ထိုအခါသင်ဖြစ်စေထဲ၌တစ်ခုအဖြစ်ဧည့်မဆိုအသုံးပြုမည်ကိုသင်လိုချင်တဲ့သို့မဟုတ်အမြဲတမ်းအသုံးပြုသူအမည်သောအခြားသူတယောက်မျှမရှိအသုံးပွုနိုငျအားဖြင့်မှတ်ပုံတင်များအတွက်အခမဲ့အကောင့်ကို။ လျှင်သင်တို့အထဲ၌တစ်ခုအဖြစ်ဧည့်သည်၊သင့်ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်ဖြစ်လာရရှိနိုင်အမြန်ဆုံးသကဲ့သို့သင်တို့အထဲထဲက၊သင်ကိုယ်သင်၏ မိတ်ဆွေစာရင်း၊အမှတ်၊ပိတ်ဆို့စာရင်း၊နှင့်ဦးစားပေး။ မှတ်ပုံတင်ထားသောအသုံးပြုသူများစောင့်ရှောက်ဖို့မရဟာသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူအမည်များကို၊မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းများ၊မှတ်၊နှင့်အားလုံးချိန်ညှိအမြဲတမ်းတစ်ခုချင်းစီအချိန်သူတို့ပြန်လာ။ မှတ်ပုံတင်အတွက်အကစားတဲ့စကားပြောအကောင့်အခမဲ့။ ပြီးနောက်သင်တို့အထဲ၌၊ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအခလုတ္အားအလှည့်ဖျားဘီး။ ဘီးပြနေး၏ကျပန်းအသုံးပြုသူများအတွက်အသီးအသီးအခန်းအတွက်။ တစ်ဦးလျှင်အမျိုးကအနက်ရောင်၊ဒါကြောင့်အသုံးပြုသူရဲ့ကမ်မသန်မစွမ်းဖြစ်ပါသည်။ အခါဘီးကိုရပ်လိုက်တဲ့အပေါ်အမျိုး၊သင်ဖြစ်စေပေါ်တွင်နှိပ်ပါချက်တင်ချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူသို့မဟုတ်နှိပ်လှည့်ဖျားရန်လှည့်ဖျားဘီးမှတဖန်ကြိုးစားရဖို့တစ်စုံတစ်ဦး။ အဆက်ပြတ်မှတိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောခန်း၊ပေါ်တွင်နှိပ်ပါအပိတ်ခလုတ်ကို။ သင်သည်တစ်စုံတစ်ဦးကိုတွေ့မြင်လျှင်၊စာနယ်ဇင်းအနမ်းခလုတ်ကိုသူတို့ကိုပေးစေခြင်းငှါ။ သူတို့အထင်သင်မည်သည့်လမ်းအတွက်စာနယ်ဇင်းအချီးမွမ်းဖို့ခလုတ်ကိုပေးချက်။ သင့်ကိုကြည့်ရှုလျှင်တစ်စုံတစ်ဦးကများကြီးနှင့်အတူအချက်များကိုသင်သိ၊သူတို့ကတန်ဖိုးရှိနှင့်အတူစကားပြော။ သင်ဖိတ်ခေါ်နိုင်ပါသည်မည်သူမဆိုသိကြအီးမေးလ်ဖြင့်။ ရိုးရှင်းစွာအပေါ်တွင်နှိပ်ပါအဖိတ်ခေါ်ခလုတ်ကိုထည့်သွင်း၊သူတို့ရဲ့အီးမေးလ်လိပ်စာ၊နှင့်ပေါ်တွင်နှိပ်ပါပေးပို့ဖိတ်ခေါ်။ သူတို့ သူတို့လက်ခံရရှိထားတဲ့အီးမေးလ်ကိုလင့်ခ်နှင့်အတူအရာသူတို့အပေါ်တွင်နှိပ်ပါအတူချိတ်ဆက်ဖို့သင်အပေါ်ကစားတဲ့စကားပြောခန်း။ ကစားတဲ့စကားပြောဆုံးဖြတ်ရာကျပန်းစကားကလူကိုပြသရန်အပေါ်ဘီးပေါ်အခြေခံပြီးအခန်းတစ်ခုချင်းစီလူတစ်ဦးအတွက်။ ဥပမာအားဖြင့်၊လူအပေါင်းတို့သည်အခန်းတွင်ဧည့်မည်မြင်သာလူတွေကရွေးချယ်တဲ့အခန်းအပေါ်ဘီးနေသမျှကာလပတ်လုံးသူတို့၌တည်သောအခန်း။ ပြောင်းလဲဖို့ခန္း၊ရိုးရိုးရွေးမည်သည့်အခန်းတွင်အခန်းပေါင်းနူးကိုနှိပ်ပါ၊နှင့်သွား။ နောက်တစ်နည်းသင်သည်လည်းတတ်နိုင်သမျှအမျိုးအစားမည်သည့်အခန်းထဲသို့သင်အလိုအခန်းနူးမှဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသောအခန်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊အခြားသူများလည်းအမျိုးအစားတူညီတဲ့အခန်းအမိန့်၌သင်တို့အဘို့အကြည့်ရှုနိုင်မှတစ်ခုချင်းစီအခြားအပေါ်။ ဟုတ်ကဲ့။ သင်ရိုးရှင်းစွာအမျိုးအစားမည်သည့်အခန်းထဲသို့သင်အလိုအခန်းနူးကိုနှိပ်ပါပေါ်သွားဖန်တီးရန်နှင့်အခွင့်အခန်း။ ဟုတ်ပါတယ်၊အခြားသူများလည်းအမျိုးအစားတူညီတဲ့အခန်းအမိန့်၌သင်တို့အဘို့အကြည့်ရှုနိုင်မှတစ်ခုချင်းစီအခြားအပေါ်။ ငါမြင်ကြောင်းတစ်စုံတစ်ဦးချင်ချက်တင်နှင့်အတူ၊ဒါပေမဲ့သူတို့မရှိတော့များမှာ။ ငါသူတို့ကိုပြန်? လျှင်သင်မှတ်မိသူတို့ရဲ့အသုံးပြုသူ၊ပေါ်တွင်နှိပ်ပါ အရှာခလုတ်ကိုညာဘက်ခြမ်းတွင်၊သူတို့၏အသုံးပြုသူအမည်အတွက်ရှာဖွေရေးအကွက်ကိုနှိပ်ပါ၊နှင့်သွား။ သူတို့ရောက်နေတယ်ဆိုရင်၊သင်ပါလိမ့်မယ်သူတို့ရဲ့လွှဲပြောင်းနှင့်အသုံးပြုသူအမည်ရှာဖွေရေးရလဒ်များကိုအတွက်သင်နိုင်ပါလိမ့်မည်အပေါ်တွင်နှိပ်ပါကိုသူတို့ကိုဖိတ်ခေါ်ရန်။ ကိုထည့်သွင်းဖို့တစ်စုံတစ်ဦးမှသင်၏မိတ်ဆွေစာရင်း၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါမိတ်ဆွေနေတဲ့အချိန်မှာသင်ခလုတ်စကားပြောလူတစ်ဦးနှင့်အတူ။ သူတို့ကထိုအဖြစ်စေလွှတ်ဖိတ်သောသူတို့လက်ခံရန်သို့မဟုတ်ကျဆင်း။ ဆိုရင်သူတို့လက်ခံရန်၊သင်မြင်ရပါလိမ့်မည်သူတို့ကိုထည့်သွင်းသင့်မိတ်ဆွေစာရင်း။ သင်သည်လည်းနှိပ်ပါအခလုတ္အားနောက်တဖန်အအကြိမ်အနည်းငယ်မြင်လျှင်အပေါ်ကိုတက်ပြသဘီး။ ပိတ်ဆို့ဖို့တစ်စုံတစ်ဦး၊အဆိုပါပေါ်တွင်နှိပ်ပါပိတ်ဆို့နေတဲ့အချိန်မှာသင်ခလုတ်စကားပြောလူတစ်ဦးနှင့်အတူ။ သူတို့ကတော့ထည့်သွင်းသင့်ပိတ်ဆို့စာရင်း။ သင်၏လျှပ်တစ်ပြက်အပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဦးစားပေးရွေးချယ်မှုခလုတ်မှာညာဘက်အောက်ခြေ၊ပြီးတော့အပေါ်ထပ္မံျဖည့္စြက္သည္လျှပ်တစ်ပြက်။ အဘယ်သူမျှမ။ သငျသညျကိုအသုံးပွုနိုငျချက်တင်ကစားတဲ့မပါဘဲတစ်ဦးကမ်၊ဒါပေမယ့်အခြားအသုံးပြုသူအမည်မြင်ရပြီးအနက်ရောင်အမျိုးအစားများ၏အသက်ရှင်လျှပ်တစ်ပြက်။ အခုအချိန်မှာ၊အမှတ်ရရှိခဲ့အပေါ်ကစားတဲ့စကားပြောပေးရုံသင်ကြွား အခြင့္အေ။ ကျနော်တို့အစီအစဉ်ကမ်းလှမ်းချက်များအတွက်ဆုလာဘ်အချက်များရရှိခဲ့ပြီးအနီးအနာဂတ်၊ဒါကြောင့်အပိုဝင်ငွေပိုကောင်းသင့်ရဲ့အခွင့်အလမ်းရတဲ့ကောင်းသောအရာတစ်ခုခု။ ကစားတဲ့စကားပြောသည်ပုဂ္ဂလိကဗီဒီယိုချက်တင်ကွန်ယက်အရာနည်းလမ်းများသင်သည်အဘယ်သို့ပြုပါသည်အထိသင်ကဲ့သို့ကြာမြင့်စွာသင်ကြသည်မဟုတ်မည်သည့်ဥပဒေများကိုချိုးဖောက်။ သင်ဟာဖြစ်ရမည်ကျော်သက်အရွယ်အနှစ်ကိုသုံးမှကစားတဲ့စကားပြောခန်း။ ဟုတ်ကဲ့။ သင်တိုင်တစ်စိတ်ကြိုက်ကစားတဲ့စကားပြောအက္ပ္ကိုသို့သင့်ရဲ့ကွန်ရက်စာမျက်နှာအခမဲ့ျဖစ္သည္။ ရရန်ဒီနေရာကိုနှိပ်ပါသင့်ရဲ့ထပ္ဆြဲပါ။
အခန်း၊ များကိုအကောင်းဆုံးချက်တင်အခန်းပေါင်းမှတဆင့်ဝဘ်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောတွေ့ဆုံတစ်ဦးတစ်၊နှင့်စကားပြောမိန်းကလေးငယ်များနှင့်အတူ၊ဒါ့အပြင်အခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းအတွက်ဆယ်ကျော်သက်၊ သည္မိုဘိုင်းချိန်းတွေ့နှင့်မိုဘိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း၊တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှစကားပြောခန်း၊ အကောင်းဆုံးချက်တင်ဆိုက်ထဲကနေချက်တင်ဆိုဒ်များပေးအသက်ရှင်သောချက်တင်အခန်းပေါင်း၊နှင့်လည်းအခမဲ့အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်းပေးဖျော်ဖြေရေး၏ဝဘ်အွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း အခမဲ့၊ဒေသခံတစ်ဦးတစ်ယောက်တိုင်းကနိုင်ငံနှင့်အမြို့မြို့၊စ ဖျော်ဖြေဝက်ဘ်အသုံးပြုသူများအားဖြင့်ဂိမ်းများအကြောင်းကိုက်ပ္။ လည်း၊ပျော်စရာချက်တင်အပေါ် သင်ရွေးချယ်နိုင်ပါတယ်တိုင်းစကားပြောကွက်မှအမျိုးမျိုးသောအမျိုးအစားများအပေါ် ။ ကိုယ်တော်၏နိုင်ငံကိုရွေးချယ်ပါသို့မဟုတ်ဒေသဆိုင်ရာသို့မဟုတ်လည်းမည်သည့်အမျိုးအစားစကားပြောခန်းနှင့်အွန်လိုင်းချက်တင်၊ လည်းဖျော်ဖြေဆယ်ကျော်သက်များအတွက်ဆယ်ကျော်သက်ချက်တင်အပေါ် ခန္းမ်ား၊စ များကိုဖြည့်စွက်ဘာင္ကြက္ချစ်ချက်တင်။ ဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူအမျိုးသမီးရဲ့မိန်းကလေးငယ်များ၊လူကြီးများ၊မိသားစုနှင့်မိတ်ဆွေများကလည်းကျပန်းဗီဒီယိုစကားပြော။ ကိုရောက်စေဘာသာအခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းလွန်းလို့ခရစ်ယာန်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း၊မြတ္စလာမ္ချက်တင်အခန်းအခမဲ့အွန်လိုင်းမပါဘဲမည်သည့်မှတ်ပုံတင်အသုံးပြုသူလည်းမှတ်ပုံတင်သူတို့ဝှက်လျှင်သူတို့လိုချင်တာလည်း၊သူတို့မှတ်ပုံတင်နိုင်သူတို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်စကားပြောခန်း။ ေယူဆ ဆောင်ခန်းပေါင်းစကားပြောခန်းများအတွက်သြစတြေးလျနိုင်ငံအဘယ်မှာရှိသင်ယောက်ျားတွေချက်တင်စကားပြောနိုင်မှာသူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူစလုပ်ဖို့ခံစားဗီဒီယိုချက်တင်နှင့်အတူမိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသက်ရှင်သောချက်တင်အခမဲ့။ ချက်တင်အခန်းပေါင်းအဘို့အခပ်သိမ်းသောအသက်အရွယ်အုပ်စုစကားပြောဆိုချက်၊ခပ်သိမ်းသောပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးကိုနိုင်ချင်မှပူးပေါင်းအင်တာနက်နှင့်ရှာသောချက်တင်အခန်းပေါင်းသို့မဟုတ်အလုပ်နေ ရှာဖွေနေသူတို့ရှာတွေ့မှအခန်းပေါင်းအတွက်သူတို့ရဲ့အသက်အရွယ်နှင့်ကိုက်ကုမ္ပဏီချစ်ချက်တင်နှင့်ချစ်ကြည်သတ်ပစ်ရန်မိမိတို့အချိန် ကိုပိုကောင်းတဲ့နေရာအရပ်ရှိသမျှအသက်အရွယ်အုပ်စုကလူရှာတွေ့နိုင်ပါသည်နှင့်လာဘို့အကောင်းပတ်ဝန်းကျင်အတွေ့ဖျင်းသတင်းများနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောလူအမျိုးမျိုးနဲ့မှလူမျိုးရေးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုများနှင့်နိုင်ငံများ။ အသက်အရွယ်အုပ်စုများ၊သင်ရှာတွေ့နိုင်ပါသည်ဆယ်ကျော်သက်များနှင့်အရွယ်ရောက်ပြီးသူများနှင့်အသက်အရွယ်တိုင်းလူတွေကဟုတ်တယ် လုပ်ခွင့်မပြုသောအောက်နှစ်ကလေးတွေအသက်အရွယ်အုပ်စုများဆိုလိုဆယ်ကျော်သက်အရွယ်ရောက်ပြီးရင့်ကျက်အသက်အရွယ်တူ၊သို့မဟုတ်တူတစ်ခုခုအကြောင်းလူတွေကိုပူးပေါင်းမဋ္ဋများအတွက်ပျော်ရွှင်မှုနှင့်အတွေ့အနားယူချက်တင်ပတ်ဝန်းကျင်။ ဒါ့အပြင်၊နိုင်ငံတိုင်းလူမျိုးတိုင်းလူမျိုးနှင့်ဒေသဆိုင်ရာလူမျိုးပူးပေါင်းဖို့ဒီမှာဆိုအုပ်စု၏အသက်အရွယ်။ အကောင်းဆုံးနေရာအတွက်အွန်လိုင်းအခမဲ့ချက်တင်မမှတ်ပုံတင်ရေးအတွက်လိုအပ်သောပူးပေါင်းအခန်းတစ်ပျော်စရာ ချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူအများစုကဖော်ရွေစတုတ္ထပုံမှန်ပြန် ။ ချက်တင်။ အေးမြသောချက်တင်အခန်းတစ်ခန်းနှင့်အတူရောနှော၏အသက်အရွယ်အုပ်စုနှင့်ဖော်ရွေမှုကလူ။ ပျော်စရာမှော်များနှင့်ပျော်ရွှင်ဖွယ်ပတ်ဝန်းကျင်အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ၏အာဖရိကရှိကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်အဆင့်အတန်းနှင့်ညီမျှ၏။ ဆိုးလ်၊ အကြီးဆုံးမြို့နှင့်မြို့တော်၊သည်အဖြစ်ခွဲခြား (အထူးစီးတီး)၊အစဉ်အလာမယ့်အကြီးဆုံးမြို့ကြီးများ(အောက်ပါစာရင်းကိုကြည့်ရှု)အဖြစ်ခွဲခြား (မြို့ပြမြို့ဖွေမြို့တောင်ကိုရီးယား)။ သေးငယ်တဲ့မြို့မြို့အဖြစ်ခွဲခြားသည်(မြို့)နှင့်အောက်ပြည်နယ်၊တစ်ချိန်တည်းမှာအဆင့်အဖြစ်(ဖွေမြို့နယ်၏တောင်ကိုရီးယား)။
ဖါက္ခြဲတဲ့ကိုးရီးယားပွဲတော်ကျင်းပနေ့၏အလုပ္သာလကၡဒိန္(ခုနှစ်အတွက်)။ ဖါက္ခြဲတ၏နှစ်ခုအအကြီးမားဆုံးအားလပ်ရက်ရီးယား(အခြားအ)။ ဒါဟာစဉ်းစားသည်ကိုရီးယားနှင့်ညီမျှ၏ကျေးဇူးနှင့်အချိန်မှဂုဏ်အဘိုးနှင့်အတူအသစ်စက်စက်ရိတ်သိမ်းသီးနှံနှင့်သစ်သီး။ အဖြစ်အဘို့အကိုရီးယားဖျော်ဖြေရေးပရိသတ်များ၊၎င်း၏့သီကြည့်ဖို့သူတို့ရဲ့အကြိုက်ဆုံးကိုရီးယားအနုပညာအတွက်အစဉ်အလာဝင္ဇာတ္လမ္းလိုလူတိုင်းပျော်ရွှင်ဖါက္ခြဲ။ ဝေမျှအနည်းငယ်ပည္သူ၏အချို့သောအမျိုးသမီးပေါ့ပ်အဖွဲ့ဆံုး ။
ကျွန်တော်အကြံပြုရှာဖွေဖို့နေရာထိုင်ရေးကအဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့စံပြလူကိုကဲ့သို့ဖြစ်လိမ့်မယ်လို့။ ဘာလိုဝတ်ဆင်? ဘာသည်သူ၏အသက်တာ၏မစ်ရှင်နှင့်။ အဘယျသို့အမျိုးအစားများ၏ကိုယ်ရည်ကိုယ်သွေးရောက်? ဘယ်သူ့မိဘများကဲ့သို့(အရာတစ်ခုခုရမယ်ထင်ကြောင်းကိုသင်ချင်တယ်ဆိုရင်ကိုရီးယားလူလဲ?) ဘာဖြစ်နှစ်ဦးစလုံးသင့်နှင့်သူ၏စံပြဆက်ဆံရေး။ သင်သွားအဖြစ်ပေါ်ထွက် ရက်စွဲများနှင့်တွေ့ဆုံယားယောက်ျားတွေသင်မယ်ရှာရာသင်ကြိုက်နှစ်သက်မှုအရာတို့ကိုသင်ထားပါ။ စောင့်ရှောက်ျပန္လည္စိစစ္သည္နှင့်ကျန်ရှိစေသည်ဘယ်အရာကိုသင့်ရဲ့စံပြကိုရီးယားလူသားအဖြစ်ပိုပြီးအတွေ့အကြုံ။ မှတ်ချက်:စဉ်အဘယ်သူမျှမသို့မဟုတ်ထိုမိန်းမသည်ပြီးပြည့်စုံသောသင်ပျော်စရာရှိသည်နှင့်အတူ။ ဒါကြောင့်၊ဒါကြောင့်အဘို့အသွား။ ဘာတက်အဆုံးသတ်ဖြစ်နေတာကသူတို့အဘို့အနည်ထိုင်သောသူတယောက်ကောင်လေးလုပ်ခဲ့ထိုသူတို့ကိုနှုတ်ကိုမေး။ ထိုအခါသူတို့ကျေနပ်ကောင်လေးအတွက်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်၎င်းတို့၏စံပြမျိုးအစား(သို့မဟုတ်သဘောမရှိသောအပြောင်းများအတွက်။)အွန်လိုင်းအများအပြားရှိပါတယ်အွန်လိုင်းကွန်ရက်စာမျက်နှာတွေဘယ်မှာသင်တွေ့ဆုံရန်ပါဘူး။ အဆိုပါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားင့်အစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားအမျိုးသမီး။ သင်ဖတ်နိုင်ကငါ့အတွေ့အကြုံနှင့်အတူကိုရီးယားကင္ယာအပေါ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်။ တကကမ္ဘာထဲမှာဖြစ်စေနိုင်ပါတယ်အစည်းအဝေးပါဘူး။ ဥပမာအားဖြင့်၊သငျသညျမှနျသှားနိုငျတစ်ဦးကကော်ဖီဆိုင်ထိုင်ဘေးချစ်စရာယားပါဘူး။ ထိုအခါဆွဲထုတ်၏ကိုရီးယားလေ့လာမှုစာအုပ်နှင့်သူတို့ကိုမေးဖို့ဘယ်လိုပြောတဲ့အချို့စကားလုံး။ သင်မှန်ထိုသို့ပြုလျှင်၊သူတို့သည်မေတ္တာရှင်တို့ကိုပြောဖို့(နှင့်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပိုပြီး)မှတဆင့်လူမှုရေးစက်ဝိုင်းသင်မေးနိုင်၏ကိုးရီးယားသူငယ်ချင်းတွေဆိုရင်သိ၏ မဆိုပါဘူးသူတို့သတ်မှတ်နိုင်သည်သင်ပွင့်နှင့်အတူ။ သို့မဟုတ်ရိုးရိုးအတွေ့ယောက်ျားတွေမှာပါတီများနှင့်လူမှုအဖွဲ့။ ၎င်း့တစ်ဦးကိုပစ်ခတ်တန်ဖိုးရှိ။ မဆိုအမှု၌သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဖြားယောင်းရန်ကိုးရီးယားအမ်ိဳးတော့ကျွန်တော်အကြံပြုသွားတွေအများကြီးမှတဆင့်။ သင်မယ်အဘယျသို့ထွက်ရှာတွေ့သင်တို့အလိုနှင့်ပို။ ကိုယ့်ကြောင့်လှည့်ပြီးအပေါ်ဒါပေမဲ့ကြောင့်ငါတို့သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာရှိခြင်းအမျိုးသမီးတစ်ဦးပတ်ပတ်လည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လက်ရုံးတော်ကိုချွတ်ပြသ။ သင်ျစူပါပါးလွှာသို့မဟုတ်တော်တော်လေး။ သေချာမတယ်ဆိုရင်တော့မေးသင့်ကောင်လေးမိတ်ဆွေ(့)ထားရန်သင်ပြောပြ။ သင်လည်းခံစားရ၏ကိုယ်ခန္ဓာ၏စိတ်ကူးတစ်ခုရရန်မည်သို့ခံစားရတစ်ဦးယောက်ျားတစ်ယောက်အတွက်အခါသူကခံစားသည်။ သင်သည်တတ်နိုင်သောအရာကိုရှာဖွေတွေ့ရှိတဲ့အစိတ်အပိုင်းသင်သည်သင်၏ကိုယ်ခန္ဓာကိုကောင်းသောခံစားရ။ ဘာပဲငှါဆန္ဒရှိမယ်ဆိုရင်သင်ဖော်ပြရန်အတွက်ပိုပြီးနှစ်သက်ဖွယ်နည်းလမ်းဖြားကိုရီးယားလူကိုပိုပြီးအလွယ်တကူ။ ပါကကိုးရီးယားသူတို့တီအသုံးပြုတဲ့အမျိုးသမီးချွတ်ဖေါ်ပြခြင်းကသူတို့ရဲ့ရတယ်။ အမျိုးသမီးသာရိုက္ခဲ့ရပါတီတကယ်ကပြုပါနှင့်အချို့သောယောက်ျားတွေစေခြင်းငှါလှည့်အားဖြင့်ပယ်။ သင်ရှိပါကတစ်ဦးကရင်ဘတ်တော့ကျွန်တော်အကြံပြုခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချွတ်ပိုပြီးထိန်းသိမ်းပါတယ်။ တစ်ဦးတင်းကျပ်စွာတီရှပ်သို့မဟုတ်အကၤ်ီအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုတာကောင်းပါတယ်။ အများစုသောသူယောက်ျားတွေ သွားဖို့အာရှသူတို့တွေ့အနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးဆောင်ရွက်ရန်နှင့်ယောက်ျားကြိုက်။ တောင်မှရှိရမည်တန်းတူရေးအကြားလိင်အကြောင်းတီအကြောင်းလေ့လာကြည့်ရှုသင့်လုပ်ရပ်အတူတူပါပဲ။ ကျွန်တော်အကြံပြုနှင့်ထိတွေ့ရတဲ့၏ဣတ္။ စောင့်ကြည့်ရေးအဖွဲ့အချို့ရုပ်ရှင်တွေလိုအလှမယ် နှင့်သတိထားမိဘယ်လိုပြောင်းလဲနေဖြင့်မိမိအစားခ်င္ရွာအပ်ာ္ရႊင္ျ။ ဤအရေးကွီး၏နှင့်အတူကိုးရီးယားလူတွေအထူးသဖြင့်။ သူတို့ဖို့အသုံးပြုနေတာပါကိုရီးယားအမျိုးသမီးဣတ္။ တကယ်တော့၊၎င်းတို့၏တိုင်ကြားစာနှင့်အတူအနောက်တိုင်းအမျိုးသမီးသည်သူတို့၏သူရဲအသွင်အပြင်နှင့်အပြုအမူ ။ ဒီမ့္မယ္၊မကြားသေးပေမယ့်၎င်း၏အမှန်တရား။ ပြီးနောက်ဧည့္ခန္းအာရှတိုက်မှာအနှစ်နှင့်ရက်စွဲရှိခြင်းနှစ်ဦးစလုံးအနောက်ပိုင်းနှင့်အာရှအမျိုးသမီးငါပြောပြနိုင်တာကိုမေတ္တာဣတ္။ ချိန်းတွေ့အများအပြားယောက်ျားကိုရှာတွေ့သင့်ရဲ့စံပြကိုရီးယားတို့စိတ်ပျက်စရာဖြစ်မှာကြိမ်။ သင်ကူညီနှင့်အတူကိုင်တွယ်ဒါဟာအကြံပြုလိုတယ်ရှာဖွေခြင်းတချို့သင်ပျော်မွေ့မှုအရာတို့ကိုကျင့်ကိုကျင့်၏အပြင်ဘက်အစည်းအဝေးအမျိုးသားများ။ ပိုမရသင်တို့အဘို့အရက်စွဲများယောက်ျားအမျိုးသမီးနှင့်အတူဝါအချိန်ဇယားပိုမိုဆွဲဆောင်မှု။ ခံစားရ ကျွန်တော်တို့ဘာသာျပန္ခ်က္ရရှိခဲ့ပြီးအချိန်ပို။ ပိုပြီးစိတ်ဝင်စားစရာကာလအတွင်းသင့်ရဲ့ရက်စွဲများအမျိုးသားများအချစ်အကြောင်းပိုမိုသိရန်အမျိုးသမီး။ တောင်ကိုးရီးယားအမျိုးသားများအချစ်အကြောင်းကိုသင်ယူဖို့ဘယ်အရာသင်ပါဘူး။ ဒါဟာသင်ပိုပြီးကောင်းစွာ-အဝိုင်းလူတစ်ဦးသောအရာတစ်ခုခုသည်များအပြားကိုရီးယားအမျိုးသမီးပမတီခံရဖို့တတ်နိုင်။ ဤသည်ကြောင့်သူတို့လေ့လာချက်နာရီအထိပြီးစီးတကၠသိုလ္။ ထိုအခါသူတို့ဖြစ်စေအလုပ်ချိန်တစ်နေ့သို့မဟုတ်လက်ထပ်မြန်ဆုံးဂရုစိုက်တစ်မိသားစု၏နာရီနေ့က။ အများစုကကိုးရီးယားအမျိုးသမီးကြဘူးတီများ၏အတွေ့မိမိတို့ကိုယ်နှင့်ပေါ်ယူပြီးဝါသနာ၏အပြင်ဘက်တွင်တီဗွီကြည့်ခြင်းသို့မဟုတ်နှင့်အတူထွက်ဆွဲထား။ အခါပြန်လည်ချိန်းတွေ့ရီးယားသူကောင်လေးမယ်တွေ့ရှအများအပြားအသစ်သောအရာ။ တကယ်တော့၊အချို့သောအမှုအရာသင်ယူကိုဖွင့်ပါလိမ့်မယ်၊သင့်ရဲ့ကမ္ဘာကြီး။။။။။ ဥပမာအားဖြင့်၊သူကအပြင်းအထန်တောင်းဆိုစေခြင်းငှါအပေါ်တင်ဆောင်လာသင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်။ သို့မဟုတ်သူယူချင်စေခြင်းငှါဓါတ်ပုံတွေကိုသင်၏တိုင်းစက္ကန့်။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်ဒါဟာအလုပ်အကြံပြုလိုတယ်၊လက်ခံသူ့ကိုနှင့်အရာအားလုံးပါဘူး။ သင်ကမပြုလျှင်ထားပါက၊သင်အမြဲသူ့ကိုစက်ရှာပြီးအခြားကောင်လေး(ရက်စွဲပြီးနောက်သင်တန်း၏။)အဖြစ် ဘယ်လိုရှာဖွေတွေ့ရှိရန်ဖြားတဲ့လူကို၊ငါအကြံပြုပါသည်ဖို့ကြိုးစားနေမဟုတ်သူ့ကိုပြောင်းလဲ။ ကြောင်းများအတွက်သာတည်ဆောက်။ မီနိုင်အောင်မြင်စွာဖြားယားအမျိုးသားများ၊ငါသည်အကြံပြုပါသည်ဖို့ဘယ်လိုသိမှတ်ဖြားလူတို့ထံမှအိမ်ပြန်။ ဤအကြောင်းကြောင့် ချိန်းတွေ့အများအပြားရှိပါတယ်သစ်အရှင်ဖြစ်ဖို့ရရန်အကောင်းဆုံးသတင်းအချက်အပေါ်နားထောငျတျောမှအမျိုးသားများ၊ငါသည်အကြံပြုပါသည်ရတဲ့ငါ့အကိုပြန်လည်သုံးသပ်ဒီအဖြားဖြောင့်အမ်ိဳးလမ်းညွှန်။ အပေါ်ပို။ ၎င်း့ပေမယ့်ဖတ်ပြီးနောက်ကိုယ်ငါတွေ့သတင်းအချက်အလက်တန်ဖိုးနဲ့လက်တွေ့ကျတဲ့။ မေီအမည်ဖြင့်ပေးပြီးသက်သေပြဖို့ဘယ်လိုအကြံဉာဏ်ဖြားယောက်ျားတွေယေဘုယျအတွက်။ ကောင်းစွာထိုက်အဖတ်နှင့်ဟုတ်ကဲ့၊ငါပြုသူတို့ကိုထွက်စစ်ဆေးမီဖို့ကျွန်မဆုံးဖြတ်လိုက်ပါတယ်တွဲဖက်။ ငါပင်ဝယ်ယူဖတ်ရှုသူမ၏စာအုပ်များ(တယ်အချို့ကောင်းသောအချက်များ။)
ကျွန်တော်တို့ရဲ့အကြိမ်ချိန်းတွေ့အပေါ်မှာအတော်လေးအဆင့်မြင့်အဆင့်အများအားဖြင့်အင်တာနက်နှင့်ဖြစ်နိုင်ခြေအထိလူပေါင်းတွေ့ဆုံရန်မှလုံးဝကွဲပြားခြားနားသောနိုင်ငံများနှင့်ယဉ်ကျေးမှု။ ကြ သင်သည်အစဉ်အဆက်စဉ်းစားခဲ့ကြကြောင်းချိန်းတွေ့ယားကြင္း၊ဒါပေမယ့်သင်ခဲ့ဖူးကြောက်ကြောင်းကိုသူမ၏ကွဲပြားခြားနားသောနည်းလမ်းနဲ့တွေးခေါ်ခြင်းအပေါ်အခြေခံဇစ်မြစ်? သိသာထင်ရှားတဲ့၊တိုင်းကိုးရီးယားအမျိုးသမီးကွဲပြားခြားနားသည်၊ဒါပေမယ့်ယေဘုယျကင္မ္ခ်ီလားတူတန်ဖိုးနှင့်ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာမျှော်လင့်ချက်များ။ နှင့်ဤဆောင်းပါးတွင်ငါတို့သည်လိမ့်မည်ဆောင်အနည်းငယ်အရေးအပါဆုံးအရာသင်ချိန်းတွေ့ခြင်းမပြုမီသိထားယားအမျိုးသမီး။ အပေါင်းတို့၏ပထမဦးဆုံး၊သင်သိသင့်သောကိုးရီးယားအမျိုးသမီးများမှာခင်အတွက်ချိန်းတွေ့နှင့်ရော။ သူတို့နိုင်ပါတယ်၊ချစ်စရာဖစ္လာကြည်ညိုဘွယ်ကောင်းသောဒါပေမယ့်လည်းဆောင်ရွက်ကဲ့သို့ခိုင်မာ တချိန်တည်းမှာပင်။ ၏သင်တန်း၊သူတို့သစ္စာရှိအပြစ်မရှိကြောင်းအသက်ရှင်သူတို့ဆန္ဒရှိမှအသစ်သောအရာတို့ကိုသင်ယူသည်။ ပြီးတာနဲ့သင်ရက်စွဲယားမိန်းကလေးသင်ရလိမ့်မည်”ကိုးရီးယားအဖျားကို”။ သူတို့တူကိုကြည့်ဖို့မလိုကြဘူး။ အများစုကအနောက်တိုင်းတွင်ရှိသင့်သောကိုရီးယားမိန်းကလေးများအတွက်လွယ်ကူချိန်းတွေ့ခြင်းနှင့်လိင်ရှိသည်နိုင်စွန့်စားနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသား။ ဒီလုံးဝမှားယွင်းစဉ်းစား၊နှင့်ဤသည်၏တစ်ခုဖြစ်သည်အဘယ်ကြောင့်အကြောင်းပြချက်တွေအတွက်တကြောက်အရက်စွဲ ။ သင့်ရဲ့မိန်းကလေးနှင့်အတူလးမတွန်းအားသူမ၏ဖို့အဆိုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာအလှန်လျှင်အဆင်သင့်မဖြစ် ။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အဖြူရောင်အသားအရေ၊လူငယ်၊နှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ပိုကောင်းင်ကြည့်ထီးတော့အများကြီးကိုးရီးယားမိန်းကလေးများလိမ့်မည်အလျင်အမြန်အလိုအလျောက်တရားစီရင်သင်အချို့သောမျိုး၏မြို့။ နေစဉ်ချိန်းတွေ့သူမကိုစစ်ဆေးစေခြင်းငှါဒါကြောင့်သင့်ရဲ့ဖုန်းကိုအပိုကောင်းကိုင်တွယ်မပါဘဲမည်သည့်မှတ်ချက်။ သင်ကမပြုလျှင်၊အဘယ်အရာကိုသူမကမေးသည်ဤစေသူမ၏ရန်လိုဆီသို့ဦးတည်သင်ဖြစ်နိုင်ချိုး။ အချို့သောကိုးရီးယားအမျိုးသမီးများ၊အထူးသဖြင့်၊သက်ကြီးသောသူတို့ကိုပတ်လည်ကာမွီသို့မဟုတ်’့၊လေ့ရှိသည်ဖို့စိတ်ကူးယဉ်အစည်းအဝေးနိုင်ငံခြားနှင့်မလွတ်င့္လက္တြဲကိုးရီးယားလူ့အဖွဲ့အစည်း။ ကြောင့်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုအားလုံးမိန်းကလေးများအတင်းအကျပ်ခိုင်းစေခံယောက်ျားနှင့်၎င်းတို့၏မိသားစုများပြီးနောက်ထောင်။ ခေတ်သစ်ရီးယား၏အများဆုံးအမျိုးသမီးများမှာပုန်ဤအကြောင်းကိုပိုပြီးလက်ထပ်ဖို့ဆန္ဒရှိသောနိုင်ငံခြားယခုထက်အတိတ်နှစ်ပေါင်းအတွက်။ ကိုရီးယားအမျိုးသမီးသည်အလွန်ရိုသေလေးစားမှု၊သစ္စာစောင့်သိပြီးနာခံမှုရှိဖို့သူမ၏မိဘများနှင့်မိဘများ၊အလှည့်အတွက်၊အလွန်အကာအကွယ်နှင့် ကသမီးရဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးရေးရာ။ ကင္မ္ခ်ီအဖြစ်အများဆုံးအာရှနိုင်ငံများ’လူတွေမိသားစုနှင့်အတြက္ဦး။ ဘာမှမရှိဘူးရဲ့ထက်ပိုအရေးကြီးတယ်။ သူတို့ပေးဆောင် ကြီးမားအာရုံစူးစိုက်မှုအဘို့အရိုသေလေးစားဟောင်းမိသားစုဝင်။ ကင္မ္ခ်ီတွင်နေထိုင်နေကြနှင့်အတူ၎င်းတို့၏မိသားစုများသည်အထိအိမ်ထောင်။ စုံတွဲအတူတကွနေထိုင်ခြင်းသည်မဘုံနှင့်ပိုင့်အဘယ်သို့လက်ခံနိုင်ဖွယ်မဟုတ်ပါများအတွက်။ ဤအမှုတို့ကြောင့်ကိုးရီးယားမမိတ်ဆက်ပေးသူတို့ရဲ့ချစ်သူရည်းစားမှမိသားစုနဲ့မိဘများသည်အထိသူတို့အဆင်သင့်လက်ထပ်ဖို့ဒီအထူးသဖြင့်လူတစ်ဦး။ သူမမိသားစုအနက်၊အကောင်းနှင့်ကြိုးစားသင်ယူဖို့အနည်းငယ်ကိုးရီးယားစကားအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ နေစဉ်ချိန်းတွေ့ယားအမျိုးသမီးမည်ဖြစ်စနစ်တကျသေချာသည်။ လူမျှော်လင့်မည်ကိုသင်တို့ပြုမှအမှုအရာအတွက်ယားလမ်းကနေသင်ယူဘာသာစကားမှတ်မိဖို့အားလုံးအရေးကြီးရက်စွဲများအတွက်နိုင်ငံ၏သမိုင်း။ ကိုးရီးယားအချမ်းသာဆုံးနိုင်ငံများအတွက်အာရှ။ ငွေပေးသောရန်ပုံငွေကြီးမားတဲ့သဘောတူညီဒီမှာ။ ဝမ်း၊ဒါပေမယ့်စစ်မှန်တဲ့ယားမိန်းကလေးကြည့်ရှုမည်သို့သင့်ရဲ့ပိုက်ဆံအိတ်တွေအများကြီး။ သူတို့အတင်းအပေါ်ပိုက်ဆံဖြုန်းဖို့သူတို့ကိုယူမှသေချာပါစေသင့်ရဲ့အမျိုးသမီးများအတွက်စျေးဝယ်ရန်အစိတ်ကူးစိတ်သန်းစားသောက်ဆိုင်မှာအနည်းဆုံးတစ်ကြိမ်တစ်ပါတ်။ နေရာတိုင်းသင်သွားသင့်ရဲ့နေ့စွဲနှင့်အတူ၊သင်အရာအားလုံးကိုဝယ်မည်သူ့အဘို့ည့်သူမ၏အပေါ်လူမှုရေးကွန်ရက်များ တူပုံဒါကြောင့်သေချာသင်သည်ဤအဘို့ပြင်ဆင်နှင့်အမေ့အားလုံးအရေးကြီးအားလပ်ရက်များအတွက်စုံတွဲများ။ ကိုရီးယားအမျိုးသမီးသည်ကောင်းစွာပညာတတ်။ ကျော်မှုသူတို့ကိုသွားဖို့ရှိပါတယ်ကောလိပ်နှင့်ပြီးအောင်နှင့်အတူကောင်းတစ်ရမှတ်သို့သော်မိမိတို့အအင်္ဂလိပ်ဘာသာအဆင့်မကောင်း။ စဉ်းစားနေတယ်ဆိုရင်ချိန်းတွေ့၏ကိုရီးယားကြင္းဖို့သေချာပါစေကုိရီးယားဘာသာစကားအတွက်ပိုကောင်းဆက်သွယ်ရေးအတူကိုက်ညီ။ အများစုဟာမိန်းကလေးများလက်ထပ်ပြီးနောက်ရပ်တန့်အလုပ်လုပ်။ ဒါဟာအပေါ်အခြေခံပြီးသူတို့ရဲ့ယဉ်ကျေးမှုနှင့်သင်ကူညီနိုငျ။ ကိုးရီးယားမိန်းကလေးလက်ထပ်မ်ပြီးနောက်ဖြစ်လာလိမ့်မယ်အချိန်ပြည့်ရှင်နှင့်မိခင်။ မအားသူမ၏ဖို့အသွားအလုပ်လုပ်သည်အထိသူမဆုံးဖြတ်ပါလိမ့်မယ်ဒီမှာသူမ၏ကိုယ်ပိုင်။ ကိုရီးယားမိန်းကလေးများအရူးအကြောင်းလူမှုကွန်ယက်ကိုသုံးပြီးစမတ်ဖုန်း။ တစ်ခုမှာရွှေစည်းမျဉ်းများချိန်းတွေ့လက်လွတ်ဘယ်တော့မှသူမ၏ခေါ်ဆိုခသို့မဟုတ်ကိုစာသားမက်ဆေ့ခ်ျပြန်ကြားချက်နှင့်ညာဘက်ပြီးနောက်။ ဖုန္းခြေအတွက်အလွန်ဘုံရီးယားဒါကြောင့်စောင့်ရှောက်ဖို့သေချာပါစေမျက်စိသင့်မိုဘိုင်းပေါ်တွင်ရှိသမျှကိုအချိန်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ပြောကြရကြောင်းခွဲပြီးချေ။ အတူတက်ကိုချိုးဖောက်ယားမိန်းကလေးဖြစ်နေတဲ့အန္တရာယ်ရှိတဲ့အဖြစ်အပျက်။ လျှင်သင်ပစ်ရန်သူတို့ကိုသူတို့ ခဲ့ကြ၊သူတို့ရဲ့စိတ်ကူးယဉ်ကျိုးခံစားရသစ္စာဖောက်ပြီးလက်စားချေကိုရှာ။ သူတို့အပြောကောင်းတဲ့အကြောင်း၌သင်တို့၏အလုပ်ခွင်၊ကျောင်း၊သို့မဟုတ်မည်သည့်အရပ်နှင့်အတူဆက်စပ်။ ချိန်းတွေ့ယားအမျိုးသမီးစေခြင်းငှါအလွန်ကြီးစွာသောနှင့်စိတ်ဝင်စားဖွယ်ရာဒါပေမယ့်ပင်ပိုကောင်းလျှင်ဖမ်းနည်းနည်းအချက်အလက်များ၏ပတ်သက်။ မှတ်မိဖို့ကြိုးစားနိုင်ပါအတွေ့အကြုံအရာရာသို့သော်စိတ်ကိုထားသင်အတိုင်းလိုက်နာသင့်ပါတယ်ကိုရီးယားယဉ်ကျေးမှုအတွက်အောင်မြင်မှုရရန်။
ဓါန္မွလွိဳက္လွဲစြာၾကိဳစကားပြောအာဖရိက၊အဆိုပါစာရင်း၏ချက်တင်နာရီအဖွဲ့ဝင်များမှာတောင်ကိုရီးယား။ အောက်ဖော်ပြပါစကားပြောနာရီအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အသက်ရှင်သူတောင်ကိုရီးယား။ စကားပြောနှင့်အတူ၊သူတို့ကိုကျေးဇူးပြုပြီးနှိပ်ပါင်းတို့၏။ အများအပြားနှင့်မတူဘဲအွန်လိုင်းချက်တင်အခန်းပေါင်း၊ချက်တင်အပေါ်စကားပြောနာရီကပျော်စရာများနှင့်တာဝန်ခံလုံးဝအခမဲ့။ ဤသည်သင့်အတွက်အကောင်းဆုံးအခွင့်အလမ်းကိုလူတို့နှင့်အတူစကားပြောမှတောင်ကိုရီးယား။ ဖို့အခမဲ့ခံစားရပတ္သက္လုိချက်တင်နာရီနဲ့ရှေ့ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆိုက်ကိုသင်၏မိတ်ဆွေများမှ။ ယခု၊သင်ရှာနေကြသည်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ တောင်ကိုရီးယားထံမှ။ လှောနိုင်တယ်စကားပြောနာရီအဖွဲ့ဝင်များအတွက်အခြားတည်နေရာအားဖြင့်စကားပြောနှင့်အတူအခြားစကားပြောနာရီအဖွဲ့ဝင်များအသက်ရှင်သူအနီးတောင်ကိုရီးယား၊သင်သုံးနိုင်သည်အောက်ပါလင့်များကိုရာက္ၾ ။ ကိုနှိပ်ပါလင့်ခ်နှင့်စကားပြောတစ်စုံတစ်ဦးနှင့်အတူနေထိုင်နေအနီးတောင်ကိုရီးယား။ လို့မရပါကချက်တင်သာကျွန်တော်တို့ရဲ့စကားပြောခန်းအခန်း၊
သည်ကိုးရီးယားချိန်းတွေ့၊၊စသည်တို့ကို။ ကျပန်းချက်တင်နှင့်အတူစိမ်းဖြင့်ကမ္ဘာအဝှမ်းကနေ။ ကျပန်းချက်တင်အားဖြင့်စာသားမက်ဆေ့ခ်ျများ၊အသံနှင့်ကမ်။ ။ ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့် စတိုင်အတွက်ဆော့ဖ်ဝဲ ကမ်ပျော်စရာ။ ဗြိတိန်အာရုံစူးစိုက်၊ဒါပေမယ့်အားလုံးကြိုဆိုပါတယ်။ အခမဲ့နှင့်အတူအဘယ်သူမျှမမှတ်ပုံတင်လိုအပ်သည်။ အကောင်းဆုံးဗြိတိန်နိုင်ငံအခြေစိုက် ချက်တင်ဂိမ်း။ ဒါဟာသုံးစွဲဖို့အခမဲ့နှင့်မျှမမျှော်လင့်ဘဲလင့်များပယ်ဘယ်နေရာမှာမဆို။ အာမခံချက်။ အစအဖြစ်လူသိများသည်ယားချိန်းတွေ့၊ သို့မဟုတ် ။ ဒါဟာကျပန်းစကားပြောဂိမ်းကိုခွင့်ပြုကစားသမားကျပန်းစကားပြောနှင့်အတူတကျွန်းတနိုင်ငံသားတို့၏နှင့်အတူထိတွေ့ဆက်ဆံသူတို့ကိုသုံးပြီးကမ်၊အသံနှင့်စာသား။ ခံစားရ’ပြောဆို’ကျွန်တော်တို့ရဲ့နှင့်အတူ မြန်နှုန်းဗီဒီယို ။။။။။ တွေ့ဆုံရန်လူတို့နှင့်အမျိုးသမီးအခုအကိုကျပန်းချက်တင်။ သင့်ရဲ့အပြုံးအဆင်သင့်နှင့်ရယ်စရာဖြစ်ပြီးစိတ်ဝင်စားဖို့။
ကျွန်တော်တို့ဖြစ်လာကောင်းစွာအကျွမ်းနှင့်အတူနှစ်ဦးစလုံးကိုရီးယားယောက်ျားတွေနှင့်ကိုးရီးယားည၊ဒါကြောင့်အချိန်င်ဖို့အပေါ်ကိုရွှေ့မှအခြားအံ့သြဖွယ်အုပ်စုရဲ့လူများအတွက်ဒီနိုင်ငံ:ကိုရီးယားမိန်းကလေးများ။ ပထမဦးဆံုးေရာက္ခါစမွာဂ်ရီးယားများအတွက်အားလပ်ရက်ကျော်လွန်ခဲ့သောနှစ်နှစ်၊ပထမဦးဆုံးအထင်ခဲ့တာက”အလို၊အမိန်းကလေးများဒီမှာတော်တော်လေး။”။ ခွင့်ပြုခဲ့၊ငါရခဲ့ရုံရောက်လာတဲ့အတွက်နှလုံး၏အပျို၊အထွေထွေအတွက်ကြည့်ရှုအလွန်ဖက်ရှင်၊ဒါပေမယ့်အခုထိ-သူတို့ဟာတကယ်ပဲတော်တော်လေး။ နီးပါးအဖြစ်တော်တော်ငါ့အသုံးအကြိုက်ဆုံးကိုရီးယားမင်းသမီးသီချင်းဖောင်းပွ ၊ရုပ္ရွင္မင္း ၊ဇာတ္လမ္းသူကဒီနေရာမှာအောက်တွင်ဖော်ပြထားသော။ ကိုးရီးယားမိန်းကလေးသဘာဝအလျောက်မွေးဖွားကျွမ်းကျင်သူများမှကြွလာသောအခါ ၊ချစ်စရာ၊ဖက်ရှင်၊မိတ်ကပ်၊-အရာအားလုံး။ ထိုအခါအကောင်းဆုံးအစိတ်အပိုင်း။ ကချေသည်အမျိုးသမီးသို့ကောင်းစွာသူတို့ရဲ့သုံးဆယ်(ကျေးဇူးတင်ပါသည်ကောင်းမြတ်ခြင်း)အကြောင်းကိုအားလုံး တြေဝံရုပ်၊မင်္ဂလာပါမစ္စစ်၊ကိုယ့်ဘာမှမပန်းရောင်နှင့်ဆန်။ ငါသည်အပင်၏အသီးရှိကြောင်းဖြစ်လာတာပိုဆန်အလျောက်ရွေ့လျားကတည်းကဒီမှာ၊ငါရိုးရိုးသားသားခံစား။ အျသင်အလွယ်တကူရှာတွေ့ငါ့ကိုဝတ်ဆင်ပန်းရောင်ဝတ်၊သို့မဟုတ်ပန်းရောင်တီရှပ်များ၊သို့မဟုတ်ပန်းရောင်ဆံပင်တီးဝိုင်း၊အစဉ်ရရှိနိုင်ပူပြင်းတဲ့ပန်းရောင်နှုတ်ခမ်းသည်။ ကြ်န္ေနည်းပညာပိုင်းနဲ့ဒိန်းမတ်လွန်း၊ဒါပေမယ့်ဖြစ်နိုင်မဖြစ်ဘဲဆွဲဆောင်တယောငွေပမာဏမလိုအာရုံစိုက်။ ဒါကြောင့်၊အဘယျသို့ကိုကိုးရီးယားမိန်းကလေးများအထူး။ ဒီပို့စ်အတွက်ငါကြိုးစားမယ်ဖော်ပြဖို့အနည်းငယ်စရိုက်လက္ခဏာအကြောင်းငါဘာသာျပန္ခ်က္လာတဲ့သတိထားမိဖို့သူတို့ကိုအတွက်။ အဖြစ်နှင့်အတူယောက်ျားတွေနှင့်ဘောင်းဘီ၊အချို့အကောင်းနဲ့အချို့လျော့နည်းဒါကြောင့်၊သူတို့အားလုံးကျွန်တော့်ကိုယ်ပိုင်အမြင်ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုပြီးဝေမျှဖို့အခမဲ့ခံစားရသင်၏အကြံအစည်အတွက်အထူးပြောစရာမရှိ။ ထိုသို့နှောက်အယှက်အဖြစ် ။ တချို့အကြောင်းပြချက်ငယ်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများ(အများအပြားကဲ့သို့ပင်ငါ၏အသားအ)တစ်ဦးစိတ်သဘောထားရှိသည်ဟောပြောဖို့အတွက်ကလေးတစ်ယောက်နှာခေါင်းထုံးစံနှင့်အသုံးပြုမှုအဆိုပါစကားလုံး”막”ပိုပြီးဒီတော့အခြားမည်သည့်ထက်သာစကားလုံးရှိသမျှစက္ကန့် ဝါကျ။ ထင်အနှောင့်အယှက်ဆယ်ကျော်သက်ဟု”လို”အားလုံးအချိန်အတွက်”ပြီးတော့သူလိုငါနဲ့တူခဲ့ဒါကြောင့်ပဲဖြစ်ပြီးတော့အခုဆိုရင်သင်သိလား၊”ကဲ့သို့ရှိသည်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများနှင့်၎င်းတို့၏막။ နှာခေါင်းသံအရာတစ်ခုခုသည်သူတို့ဖြစ်နိုင်တစ်စိတ်တစ်ပိုင်းမသိအသံ ၊ဒါပေမယ့်အားနည်းချက်ကသူတို့ကတက်အဆုံးသတ်သံလမ်းလျော့နည်းအသိဉာဏ်ထက်သူတို့ကအမှန်တကယ်ဖြစ်ကြောင်း။ အစိတ်အပိုင်း၏ဤအပြုအမူဖြစ်နိုင်နှင့်ဆက်စပ်သောယားမိန်းကလေးရဲ့အတွက်ဦးစားပေးလုပ်နေကမ(သရုပ်ဆောင်ချစ်စရာ)၊ဒါပေမယ့်သည့်အခါတ္ထားဒါဟာပိုပြီးအနှောက်အယှက်ဘာမှမထက်သာ။ ငါဘာသာျပန္ခ်က္ဒီယိုမီ၊သင်မူကားစောင့်ကြည့်ဖို့ဒီမှာထွက်ရှာအဘယျသို့ငါဆိုလိုနိုင်:ငါဒိန်းမတ်မိန်းကလေးတစ်ဦးဧည့္ခန္းကိုရီးယားမှာသင်ကြားရေးတက္ကသိုလ်မှာတော့ဂိုဏ်းဝင်။ အခါကျွန်မအလုပ်လုပ်မယ့်၊ငါချစ်ဖို့သင်ယူကိုးရီးယား၊ရှာဖွေတွေ့ရှိဤလှပသောပြည်ကို၊ဖတ်နှင့်ဘလော့ဂ်ကကျွန်မရဲ့အတွေ့အကြုံနှင့်အကြံအစည်။ အတွက်ကျေးဇူးအဘွယ်ဆောင်းပါးကျွန်တော်ပုံခြင်း၏တစ်ဦးသည်စစ်တိုက်ဆက္ခ်က္ခ်င္သည္။အခ်က္ၾအတူမိတ်ကပ်ဓာတ္ျအပေါ်ရထား။ ဒီနေရာမှာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုတွင်၊ငါမွီခဲ့ ယောဂ(အပိုခံပညာ၊ခက်ခဲ စတိုင်ယောဂ၏)အတန်းနှင့်အတူအထီးကိုးရီးယားလဲလှယ်ကျောင်းသားများဒါပေမယ့်မရှိသလောက်အမျိုးသမီးလဲလှယ်။ သူတို့လိုပဲခံစားဖို့အမွ်င္ဓာတ္ျ ၏ယောဂနှင့်(လုံးဝဆေးလူတစ်စုအပေါ်အခြေခံပြီးအနည်းငယ်)ခုရယ်ကျွန်မထင်ပါတယ်နားလည်မှုနည်းနည်းပိုပြီးအသက်ရှိပတ်သက်။ အချိန်မှာတိုင်းပြည်ဖွံ့ဖြိုးပြီးကိုယ်နှိုက်ကအမှန်တကယ်အစာရှောင်ခြင်း၊ငါသေချာပါတယ်သူတို့ရောက်ရှိပါလိမ့်မည်သောသူများအောင်အမှုအရာတိုးတက်ကောင်းမွန်အောင်။ အိုးချစ်၊အဘယ်သို့ကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်ငါ၌လျောက်ပတ်။ ပုံပါ၏ပြီးပြည့်စုံသောဆန့်ကျင်ဘက်ကိုရီးယားမိန်းကလေးများငါအတော်လေးတက်ကြွ၊ပါဝင်အများအပြားတွင်အားကစားနှင့်လေ့ကျင့်ရေးငါ့ကိုယ်ပိုင်အပေါ်နှင့်ဘယ်တော့မှမမိတ်ကပ်ဝတ်ဆင်။ ကောင်းပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတစ်ကြိမ်ငါးနှစ်သို့မဟုတ်ဒီတော့ကားျငါလှည့်ပါလိမ့်မယ်သို့၊တစ်ဦးထက်ပိုသောရိုးရာမိန်းကလေးပြီးနောက်အချို့သောအချိန်အတွက်ကိုရီးယား၊သို့မဟုတ်မ
မင်္ဂလာပါချစ်သူငယ်ချင်း။ မိမ််ဥ္းနှင့်ကောင်းဖြည့်ဆည်းဖို့အားလုံး၏သင်ဒီမှာပါ။ မြော်လင့်ခြင်းအစည်းအဝေးအချို့အေးမြနှင့်ကောင်းဖော်ရွေမှုကလူကဒီမှာအမှန်တကယ်မိတဲ့နေထိုင်ပုံနဲ့အဖွဲ့အတွက်တောင်ကိုရီးယား၊နှင့်၌မွေးဖွားခဲ့သည် မြို့တွင်မော်ရို။ ကြိုဆိုပါတယ်လူတိုင်းသူ။ ကြ်န္ေတာ္ကေတာ့ ဆာင္ပစၥည္းမ်ားအျရီးယား။ ကိုယ့်လုပ်ချင်အချို့နိုင်ငံခြားမိတ်ဆွေတွေ)။ ဦးအကြောင်းပိုမိုသိလို၊မည်ဖြင့်တွန့်ဆုတ်ကြဘူး။ ပဲေပးပါခင္ဗ်ာအမည္)ချစ်နိုး-အဆုံးစွန်သောအင်တာနက်အောင်သွယ်ဝန်ဆောင်မှုည့္ဒီယားတစ်ခုတည်းအမျိုးသမီးများအတွက်အွန်လိုင်းချိန်းတွေ့သည်။ ရှာနေတာပဲဖြစ်ဖြစ်အတွက်မိတ်ဆွေသူငယ်ချင်းအသစ်သို့မဟုတ်သင့်အသက်တာ၏မေတ္တာကိုသင်ရရှိလာတဲ့အတွေ့အထူးတစ်ခုတည်းမိန္းကေလးကိုမဆိုကြင်နာများအတွက်ဆက်ဆံရေး။ ကျေးဇူးပြုဖို့တခဏယူ။ ရာက္ၾခမဲ့ဓာတ်ပုံပြခန်းများအပြည့်အဝအသေးစိတ်ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရည်အသွေးကိုလူပျိုမိန်းကလေးများကနေရီးယား။ ကျဉ်းမြောင်းသင့်ရှာဖွေ၊သင်သုံးနိုင်သည်ကျွန်တော်တို့ရဲ့အဆင့်မြင့်ရှာဖွေရေးအင်ဂျင်ကိုရှာဖွေရန်အမျိုးသမီးတစ်ဦးထံမှမည်သည့်မြို့နယ်သင်နှစ်သက်။ ဖန်တီး၏ကိုယ့်ကိုယ်ကိုအခမဲ့နှင့်စတင်ဆက်သွယ်အျခားကိုရီးယားအမျိုးသမီးချက်ချင်း။ ကိုလိုက်ရှာများအတွက်အခန်းပေါင်းစကားပြောခန်း။ သင်တွေ့ပါလိမ့်မယ်သူတို့ဒီမှာပါ:ခံစားဖို့အခွင့်အလှန်ရဲလ်-အချိန်နှင့်အတူအခြားချစ်နိုး™အဖွဲ့ဝင်များအတွက်ပျော်စရာများနှင့်လွယ်ကူသော-ပေါ့။ ထည့်န့်အသတ်အရေအတွက်၏ဓါတ္ပံုအားသင့်ပရိုဖိုင်းကိုအခမဲ့ဖွင့်။ အဖွဲ့ဝင်များနှင့်အတူဓါတ္ပံုခံယူကြိမ်ရလဒ်များကိုထက်အဖွဲ့ဝင်များမပါဘဲ၊ဒါကြောင့်အလုပ်ကိုဦးစားပေးပါ။ သူတို့သည်အလုပ်ပြီးပြီဒါလွယ်ကူသော။ အခကြေးငွေအခြေခံ’ဦးခ်င္း’့မရနိုငျနှိုင်းယှဉ်။
ကြ သင်သည်အစဉ်အဆက်အာရုံစိုက်ပေးဆောင်ဖို့အကြံဉာဏ်လူတွေကပေးကြရန်အမျိုးသမီးများအပေါ်အောင်ဘယ်လိုယောက်ျားတစ်ယောက်မှကျူးလွန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး? တချို့အမျိုးသမီး၏မိတ်ဆွေများကမကြာခဏသို့အရပူသောဆွေးနွေးမှုများပုံမှန်မဏ်ဍိုသူတို့ချိန်းတွေ့လူတို့ကလှည့်ပတ်သူတို့ရဲ့ရည်းစား၊နှင့်ပင်၎င်းတို့၏ဖြစ်သူရဲ့။ ကဟန်အဖြစ်အချိန်ကြာမြင့်စွာအတိုင်းသူတို့ဆွေးနွေးမှုများမပြုပါဝင်သူတို့ကိုတိုက်ရိုက်သို့မဟုတ်ပင်မဟုတ်ဘဲ၊သူတို့တော်တော်အမြင်ကအကြံဉာဏ်ပေးဖို့သူတို့ရဲ့အမျိုးသမီးမိတ်ဆွေများ၊ဒါပေမယ့်အဖြစ်မကြာစကားလက်ဆုံ၏ခေါင်းစဉ်ကိုလှည့်မျက်နှာသို့၎င်းတို့၏ကိုယ်ပိုင်အခြေအမျိုးသားများနှင့်အတူ၊သူတို့ကဖြစ်လာမဲ့။ ဒီတော့အဘယ်ကြောင့်ဤမျှလွယ်ကူပေးချိန်းတွေ့နှင့်ဆက်ဆံရေးအကြံဉာဏ်အခါတရပ်အပြင်ဘက်အပေါ်ရှာဖွေနေအတွက်၊ဒါကြောင့်အခက်အခါသင်တို့ကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုရည်မှတ်၏ကိုယ်ပိုင်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူသင့်ရဲ့ယောက်ျား။ င်ရန်ခက်ခဲခြင်းအခါသင်၌ရှိကြ၏။ ဒါကြောင့်၊ရှောရဲ့လျင်မြန်တဲ့အကြည့်ကိုယူမှာအချို့တို့၏အဆိုပြုနည်းလမ်းများအဘို့အအောင်လူတကျူးလွန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်စာရင်းသူတို့ကိုနေရာဖြစ်ပါသည်။ ထိုအခါငါသည်ငါ၏ထင်မြင်ချက်မျှဝေသင်တို့နှင့်အတူ ပြည်နယ်ရှိမရှိကျွန်တော်သဘောတူသို့မဟုတ်သဘော၊သင်ဖိတ်ခေါ်အပေါ်မှတ်ချက်ပေးရန်အသီးအသီးတို့၏အမှတ်ကိုထည့်သွင်းပြီး၏။ သင်ချင်တယ်ဆိုရင်လူတကျူးလွန်မများလိင်နှင့်အတူသူ့ကိုအထိသင်သိသင်သာအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးသဘော။ သင်ရှိသည်မဟုတ်ကြဘူးများအတွက်စောင့်ဆိုင်းရန်ထောင်ဖြစ်လာဖို့လိင်မှတဆင့်ရင်းနှီးသောယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူ၊သင်မူကား၊သေချာအောင်ချင်သောယောက်ျားသင်သည်အိပ်ပျော်နှင့်အတူသင့်ရဲ့ချစ်၊မှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းသူဖြစ်လာ၏ရည်းစားပြီးတော့သာပြီးနောက်စတင်နိုင်ပါသည်လိင်ဆက်ဆံသူနှင့်အတူ။ ဤအာမခံချက်လိမ့်မည်အကြောင်းသင်အိပ်ပျော်နှင့်အတူအဘယ်သူသည်သင်သာအလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူပေးလိမ့်မည်၊စိတ်၏သင်သည်ငြိမ်ဝပ်စွာ။ ဤအမှုကိုပြုသောသည်နှင့်မကြောင့်သင်တို့ကိုလုပ်ဖို့ကြိုးစားနေကြတယ်လူတကျူးလွန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ သင်သာကိုယ်အဘို့အောင်ခဲ့ကြလိမ့်မည်ငြိမ်းချမ်းရေးစိတ်၏။ သငျသညျလျှင်သို့သော်ယူချင်အခွင့်အလမ်းနှင့်အတူအိပ်သူ့ကိုကတိကဝတ်မပါဘဲ၊သင်အဘို့ပြင်ဆင်သောခြင်းကိုခံရဖို့အမှုအရာမလိုက်မသွားသင့်။ သင်ရောက်နေတယ်ဆိုရင်အအေးအတူ၊ရှေ့ဆက်သွားနှင့်အတူအိပ်သည့်အခါသူ့ကိုသင်ချင်။ အချက်ကို၏ လိင်ဆက်ဆံယောက်ျားတစ်ယောက်နှင့်အတူမပါဘဲကတိကဝတ်မည်မဟုတ်လျှောက်လုပ်သူနှင့်အခြား။ လျှင်အခြားအရာအားလုံးထွက်အလုပ်လုပ်တယ်ကောင်းစွာ၊သူသည်စေခြင်းငှါကျူးလွန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူပြီးနောက်သင်အမှန်၊သို့မဟုတ်သူမဖြစ်စေခြင်းငှါ။ သင်ရုံပြင်ဆင်ခံရဖို့ရှိသည်။ ငါပြင်းပြင်းထန်ထန်အကြံပေးဘို့အသင့်ကိုယ်ပိုင်အကြောင်းအမှီတိုင်အောင်စောင့်ဆိုင်းသူကြေငြာသောသူဖြစ်၏။ ဖြစ်ခြင်းလွတ်လပ်သောသောမိန်းမအမျိုးမဆိုလိုပါဘူးကြောင်းသင်ဖို့မလိုအပ်ပါဘူး။ ဤမျှသူသည်သင်တို့ရှိသည်သောဆိုလိုတယ်သင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်သောထံမှသူ့ကိုအကျိုးစီးပွားနှင့်သင်၏ကိုယ်ပိုင်အသက်တာ။ မလိုဖြစ်ဖို့များအတွက်တစ်ခုတည်းကိုသာတာဝန်အောင်သင်တို့ကိုမင်္ဂလာရှိ၏၊သင်မူကားလည်းပြသနိုင်ဖို့လိုလူကိုသင်မွေ့လျော်ကြောင်းရှိခြင်းနှင့်သူ့ကိုသင့်အသက်တာ၌။ ကစားရန်ခဲယဉ်းရ၊မရနိုင်၊စာရင်းနှင့်အစိတ်မဝင်သာဖြစ်စေမရသည်လူအလိုရှိ၏။ သူကမပြီးနောက်ဆက်ဆံရေးအတူသူသာပြီးနောက်၊အလိုရှိ။ တစ်ချိန်ကအသင်းဖြစ်ပါတယ်၊သူကအကျိုးစီးပွားရှုံး။ မကြောင့်သင်တို့ကိုရပ်တန့်ကစားရန်ခက်ခဲရဒီရိုးရှင်းစွာသောကြောင့်၊သူတစ်ဦးသည်လူအဖို့ဆွဲဆောင်အလုံးစုံ၏အသင်းအတွက်စိတ်ဝင်စားမဟုတ်တဲ့ အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်အတူစတင်။ သူမျှသာဖြစ်ပါသည်ပြီးနောက်အလိုရှိကိုယ်တိုင်ကအမျိုးသမီးများကိုလျစ်လျူရှုလိုက်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ခေါင်သူအလိုရှိ။ ဒီလူကိုအနု၊အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ကိုလိုအပ်ရရန်ခဲယဉ်းကစားအနုအဖြစ်ကိုကောင်းစွာ။ ရေဖစ္ပါတယ္။ လျှင်သင်ကစားနေကြသည်ရရန်ခဲယဉ်းမည်ဆွဲဆောင်အမျိုး၏အမျိုးသားနေသောပြီးနောက်စိန်ခေါ်မှု။ ရချင်တယ်ဆိုရင်သူတစ်ဦးသည်လူအဘို့ရှာဖွေနေအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး၊သင့်ရိုးသားနှင့်အတူသူ့ကိုနှင့်ဂိမ်းများဆော့ကစား။ အခါသင်လိုချင်တာယောက်ျားတစ်ယောက်အဖြစ်သင်တို့နှင့်အတူရိုးသားသော၊သူ့ကိုငါပေးရိုးသားပြီးလျှင်သူ သာမျိုးကိုသင်သိသည်။ ခွင့်ပြု၊ရိုးသားမှုကြောက်စရာ၊အမှန်တကယ်ယုံကြည်စိတ်ချမိန်းမကိုကိုင်တွယ်နိုင်ပမာဏ၏ဖိရိုးသားမှုလိုအပ်သည်။ မရှိခြင်း၊အခြားတစ်ဖက်တွင်၊ကကိုအရိုကြောင်းကျွန်တော်တို့တီမကြာခဏအသိအမှတ်ပြုရန်အတွက်မိမိကိုယ်ကိုမိမိ။ ဒါဟာလုံခြုံမောင်းသောအမျိုးသမီးအားကစားရဖို့ရန်ခဲယဉ်းသည်။ ဒါကြောင့်၊ဤအသုံးအများဆုံးအရာတို့ကိုလူအကြံပေးသည့်အခါတစ်စုံတစ်ဦးသည်အောင်ကြိုးစားနေလူတကျူးလွန်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ မဘာမှမကျန်စိတ်ကိုမှလာ။ ထားခဲ့အ မေးခွန်းသို့မဟုတ်တုံ့ပြန်မှုမှတ်ချက်အပိုင်းအတွက်။ မြတ္စကြင္းမင်္ဂလာနှင့်အကြိုက်ကြဘူးတီရှိသည်ကစားရန်ဤဂိမ်းနှင့်အတူအများစုကကျနော်တို့ကဲ့သို့သောအလျှံသည့်အခါကျနော်တို့လိင်၊ကျွန်တော်ချင်တယ်သာသူလိင်ရှိသည်နိုင်လျှင်ကျွန်တော်တို့လက်ထပ်ပြီးဒီကနေကျွန်ုပ်တို့ဘာသာေရးသူကအမည်တည်းသာရှိသည်လိင်နှင့်အတူသူ၏မိန်းကလေးများ။ မႈမ်ားႏွင့္သူ၏ကိုယ်ပိုင်တိုက်လျှင်ငါတို့သည်သောလိပ်ကနေကျွန်ုပ်တို့၏သန့်ရှင်းသော ဆိုမည်ဖြစ်ပဲလိုက်နာအဆင့်အားဖြင့်အဆင့်နှင့်အသင်ပျော်ရွှင်ဖြစ်ရလိမ့်မည်ဘယ်တော့မှမမီတူ။ ကျေးဇူးတင်စကားကိုအလွန်အဘို့ဤကြီးစွာသောပို့စ်။ ကျွန်မတွေအများကြီး၏အကြံအစည်နေစဉ်ဤဖတ်သောငါပဲရေးယူထဲသို့သွင်းထား။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျွန်တော်သိချင်အောင်ဘယ်လိုငါ့အလေးအနက်ထားဆက်ဆံရေးအတွက်ပါ။ ကျနော်တို့ချိန်းတွေ့ဒါပေမယ့်ငါသူ့ကိုခံရဖို့ငါ့အချစ်။ ဤဆောင်းပါးသည်အလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေရန်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သင်အဲဒီလိုမျိုးပို့စ်တွေကအမြဲလှုံ့ဆော်၊ငါကြိုက်တတ်တဲ့အဖတ်အရည်အသွေးအကြောင်းအရာဒီတော့ကျွန်မပျော်ရွှင်ရှာတွေ့ဖို့အများအပြားအကောင်းအချက်အတွက်ဒီမှာပို့စ်ရေးသားခြင်းဖြစ်ပါသည်ရိုးရှင်းစွာအလွန်ကြီးစွာသောကျေးဇူးအများပို့စ်အဘို့ငါနှင့်အတူသဘောတူအဘယ်အရာကိုသင်ပြောသည်မှာ၊ အထူးသဖြင့်အကြောင်းသူအမျိုးသမီးကစားရဖို့ရန်ခဲယဉ်းသောကြောင့်သူတို့၏ကိုယ်ပိုင်လုံခြုံ။ ငါကဲ့သို့ဖြစ်ဖို့အသုံးပြုကြောင်းလည်းငါဘာသာျပန္ခ်က္တွေအများကြီးဆုံးရှုံးသွား၏ကောင်းခြင်းကြောင့်ကစားခြင်းလည်းမရ။ ငါ့လက်ရှိရည်းစားနဲ့ကျွန်မလုံးဝကွဲပြားခြားနားသော။ ကျနော်တို့ရိုးသားနှင့်အတူအသီးအသီးအခြားမကစားဂိမ်းတွေ၊နှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးသည်ရိုးရှင်းစွာအံ့သြဖွယ်။ သူကအစကတည္းကသူရှာနေတဲ့အတွက်လေးနက်သောဆက်ဆံရေးသည်၊နှင့်သူလက်ထပ်ပြီးစတစ်မိသားစုကိုတစ်နေ့။ ကျွန်တော်သိသောထိုသို့ဖြစ်ပျက်မှမသွားနိုင်။ ကျနော်တို့ခဲ့ကြတူတကွွင့္သူမမူတီအဆိုပြုသေး၊ဒါပေမယ့်အကြောင်းသိရုံစောင့်ဆိုင်းရန်ရှိသည်နှင့်ကြည့်ရှု၊တစ်ဦးလျင်၌မဖြစ်။ အခါအချိန်မှန်သည်အမည်၊အဆိုပြု၊ငါမူကားအကြမွီထားဆိုသူ့ကိုဖိအားပေးကြောင်းအဘယ်အရာကိုကျွန်ုပ်တို့၏ဆက်ဆံရေးဒါကြောင့်အံ့သြဖွယ်။ ကျနော်တို့မျှဝေအချို့သောအံ့သြဖွယ်အမှုအရာများနှင့်အတွေ့အကြုံ၊နှင့်သင်၏အသီးအသီးကျွန်တော်တို့ကိုရှိပါတယ်၊ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ဘဝဒါပေမယ့်ကျနော်တို့ကအလွန်နီးကပ်။ မှာအချို့သောအမှတ်ကျွန်မစိုးရိမ်မိဘယ်မှာဤအသွားခဲ့ရင်သူသွားဖို့အဆိုပြုကြာ၊ ယခုမူကားငါလေ့လာသင်ယူရန်အနားယူကြကုန်အံ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆက်ဆံရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သဘာဝမှကျေးဇူးတင်စကားသင့်ရဲ့ဆောင်းပါးတွေကိုသင့်တဲ့စာအုပ်တွေပါတယ်။ ငါအပြန်အပြတ်စောင့်ပိုမိုလေ့လာသင်ယူချင်သောကြောင့်၊သေချာအောင်ကျွန်တော်ဆက်လက်ငါ့ပုဂ္ဂိုလ်ရေးတိုးတက်မှုနှုန်းအားဖြင့်ဖတ်သင့်။ ငါသည်အမင်္ဂလာဖြစ်၏နှင့်အတူဤအချက်အလက်၊ဒါပေမယ့်ပိုပြီးလိုအပ်ချက်၊ဒါကြောင့်ကျေးဇူးပြုထပ္မံျဖည့္စြက္သည္ပိုပစၥည္းမ်ားကျေးဇူးတင်ပါသည်ဤအလွန်ကောင်းသောအအကြောင်းသိကောင်းစရာများအပေါ်အောင်ဘယ်လိုယောက်ျားတစ်ယောက်လိုခငျြနှင့်အတူဆက်ဆံရေးရှိသည်။ ငါနောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်သင့်ရဲ့အကြံဥာဏ်။ ကၽြန္ေတာ့္မွာတီ၏လူကိုတွေ့ဆုံငါ့အိပ်မက်သေး၏၊ငါမူကားအရာကိုသိမည်ပြုသောအခါငါသူ့ကိုတွေ့ဆုံရန်။ ငါဖၚျရည်းစားယခုမူကား၊ငါသည်ချိန်းတွေ့တစ်စုံတစ်ဦး။ ကျွန်တော်ထွက်သွား၏သုံးရက်စွဲများ။ သိချင်တာငါဘာလုပ်သင့်လုပ်သူနှင့်အတူဆက်ဆံရေး။ ငါအများကြီးသင်ယူထံမှအကြံပေးချက်များ၊သင်မှန်၊လူအပေါင်းတို့သည်ထိုအမှုအရာတွေဟာကျွန်တော့်ကိုပြောသည့်အခါကျွန်တော်မေးငါ့သူငယ်ချင်းတွေအကြောင်းငါဘယ်လိုနိုင်အောင်သူ့ကိုအလေးအနက်ဆက်ဆံရေး။ ငါတကယ်သဘောပေါက်နားလည်သဒါကြောင့်အမှန်တကယ်ငါ့ကိုအကူညီခဲ့ကိုတွေ့မြင်အမှုအရာရှင်းရှင်းလင်းလင်းကို။ ငါနောက်သို့လိုက်ကြလိမ့်မည်သင်၏အကြံဉာဏ်ကိုသင်တို့သိကြကုန်အံ့။ ငါ့ ချစ်ရန်ကျူးလွန်သည်ငါ့ကိုငါဘဲတီအိပ်စက်သူနှင့်အတူပထမဦးဆုံးအညတွေ့ဆုံခဲ့သည်။ ငါအသက္ကိုမပြုမီလပေါင်းများစွာကကျွန်တော်တို့ရင်းနှီး။ မီငါသည်အရအသုံးပြုရင်းနှီးနှင့်အတူယောက်ျားတွေအလွန်အမကြာမီသူတို့ဆက်ဆံရေးကြာမြင့်။ ကျွန်တော်ဖတ်ချင်ပါတယ်ပိုပြီးသင်သည်သင်၏အကြံပေးချက်များအပေါ်အောင်ဘယ်လိုလူမှကျူးလွန်။ ကျေးဇူးပြုပြီးရေးအကြောင်းပို။ ငါသည်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်မှကြွလာ၏။ ဤအကြံပြုချက်များအလွန်အထောက်အကူဖြစ်စေကျွန်တော့်အတွက်ဖြစ်နေပါတယ်။စတင်ပြီးကြည့်ဖို့အသစ်အကောင်လေးနှင့်သေချာအောင်ချင်သူလိုလားနှင့်အတူတစ်ဦးဆက်ဆံရေးၽြန္ုပ္၏နှင့်မယ့်ကျပန်းတစ်ခုခု။ ငါမွီခဲ့ကွာရှင်းယခုအနှစ်အဘို့ငါပဲစမှချိန်းတွေ့။ ငါအပေါ်တစ်ဦးပရိုဖိုင်ရေပန်းစားချိန်းတွေ့ဆိုဒ်နှင့်တွေ့ဆုံစာရေးကောင်းတဲ့ယောက်ျားဒါပေမဲ့ဒီတစျကယ့်ကိုငါ့အဘို့ကိုအထူးနှင့်ချင်တာသေချာအောင်ပါဘူးတီဝက်အူသူနှင့်အတူတက်။ စောင့်ရှောက်တင်ထားသောအလွန်ကြီးစွာသောဆောင်းပါးတွေကို။ ငါသည်သင်တို့ကိုစောင့်ရှောက်မည်။ မင်္ဂလာပါ၊ငါပဲသိဒီလူ။ သူကေျပာပါတယ္ရှာဖွေနေသည်အလေးအနက်ဆက်ဆံရေးနှင့်သူလိုတဲ့မိသားစု၊သူ့ကိုငါမေးသော်၊ဘယ်မှာရပ်ပြီးသူကပြောကျွန်တော်ကသူ့ရည်းစား၊ဒါပေမယ့်ကျွန်တော်တီခံစားရဒါဟာကျနော်တို့ထား ခဲလှ၏အမြင်အသီးအသီးအခြား၊နှင့်ငါတွေ့သောဘာသာျပန္ခ်က္ကြီး၏အပေါ်သံသယ။
© 2019 ဗီဒီယိုက ချက်တင် ကိုရီးယား